04/05/13 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Friday, April 05, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
မတ်လ (၂၈) ရက်နေ့က ဘူးသီးတောင်မြို့ ၊ ဓမ္မ မဏ္ဍိုင်ကျောင်းမှ ဦးပညာ သီရိအား မူဆလင် ဘာသာဝင် ဘင်္ဂလီ သုံးဦးမှ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပါးရိုက်ကာ စော်ကားရာတွင် ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူ နှစ်ဦးအား ယနေ့ တွင် ပုဒ်မ (၃) ခုဖြင့် ထောင်ဒဏ် (၁၀) နှစ်စီ ချမှတ်လိုက်ကြောင်း ဘူးသီးတောင် တရားရုံးက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ဘင်္ဂလီများ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်းကို တရားခံများ ထွက်ဆို ထား သဖြင့် တရားဥပဒေအရ ပုဒ်မ(၄၅၂)၊ သာသနာကို အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ (၂၉၅)တပ်ကာ ရဲ စွဲချက် တင် ခဲ့ကြောင်း မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့က သိရှိခဲ့သည်။
သံဃာတော်အား ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားသူများမှာ ပုဇွန်ချောင်းကျေးရွာမှ ကာမာလ်(၂၂) ဟာမတ် တူဆောင်း(၂၀)နှင့် အီနူးဆ်(၁၉)နှစ်တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိခဲ့ရပြီး ယနေ့တွင် တရားရုံးက ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံ ရသူနှစ် ဦးအား မည်သူဖြစ်ကြောင်းကို ဆက်လက် စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။
From: Arakan Times
SSA(ဝမ်ဟိုင်း)အဖွဲ့မှထောင်ထားသောမိုင်းအားနင်းမိ၍ ရွာသား၂ ဦးသေဆုံး ၂ ဦးဒဏ်ရာရ
Posted by drmyochit Friday, April 05, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ ကောင်ဆိုင်ရွာ မှ ယနေ့ညနေ ၅ နာရီချိန် ခန့်တွင် သောက်ရေ ခပ်ရန် ရေလို သဖြင့် ရေခပ်ရန် ထွက် လာသော ရွာသား များသည် SSA(ဝမ်ဟိုင်း) အဖွဲ့မှ ထောင် ထားသော မိုင်းအား နင်းမိ၍ ပေါက်ကွဲ မှုဖြစ် ခဲ့ရာ ရွာသား၂ ဦးသေဆုံး၍ ၂ ဦးဒဏ်ရာရရှိ (မစိုးရိမ်ရ) ကြောင်းသိရှိရသည်။ ဟွန်တရွာ ရွာသား မောင်ကျိုင်းလုံစံ၊ အသက်(၂၅)နှစ်၊ (အဘ) ဦးလီကြူးစံ၊ ဘယ်ခြေသလုံး ၂ ချက်၊ ညာပေါင် ၃ ချက်၊ ညာဒူးအောက် ၁ ချက်၊ ကောင်းဆိုင်ရွာ ရွာသား မောင်စိုင်းဟင်၊ အသက် (၂၁)နှစ်၊ (အဘ) ဦးစိုင်း ခင်ကြံ၊ ညာခြေသလုံး ရှပ်ထိ ၁ ချက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိ(မစိုးရိမ်ရ) ကောင်းဆိုင်ရွာ ရွာသား ဦးစိုင်းခင်ကျန်၊ အသက် (၅၅)နှစ်၊ (အဘ)ဦးစိုင်းလုံဟန်၊ ဘယ်ခြေ သလုံး ကျိုး၊ ဘယ်တင်ပါး ၂ ချက်၊ ဘယ်ဝမ်းဗိုက် ၂ ချက်ထိ မှန်(သေဆုံး)၊ ကောင်းဆိုင်ရွာ ရွာသား ဦးကျိုင်းဟန်စံ၊ အသက် (၄၃)နှစ်၊ (အဘ) ဦးကျိုင်လုံးစံ၊ ညာဆီး စပ် အစ ၂ ချက်ထိမှန် သေဆုံး ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ တပ်မတော် စစ်ကြောင်း များမှ လိုအပ် သည့် ဆေးဝါး ကုသမှုများ ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဗ္ဗဒူလာမင်းကိုနိုင် သို့ မိတ္ထီလာသားတစ်ဦးထံမှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ...
Posted by drmyochit Friday, April 05, 2013, under တစ်ဆင့်ပြန်လည်ဖော်ပြ | No comments
မြန်မာပြည်မှာ တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ မင်းကိုနိုင်ဆိုတဲ့ မင်း.က ရှေ့ တန်းက နာမည် ၀င်ယူလေ့ ရှိတာဆိုတာ ရိုးနေပြီ။ ရခိုင်ပြည်နယ် မွတ်ဆ လင်-ဗမာ အထိကရုဏ်း ဖြစ်တုန်းကလဲ မင်း . ပါခဲ့တာပဲ… ဒါပေမယ့် မင်းက ငါတို့ တိုင်းရင်းသား ရခိုင်တွေဘက်ကမဟုတ်ဘူး. မွတ်ဆလင်တွေဘက်က ပါခဲ့တာ။
အခု ငါတို့မိတ္ထီလာမှာ မွတ်ဆလင်-ဗမာအရေးအခင်းဖြစ်တော့လဲ မင်း.ပါ လာပြန်တယ်။ ဆင်တစ်ကောင် လုံး တွေ့နေတာတောင် ဆင်ခြေ ရာ ရှာသလိုမျိုး အထာတွေ မင်း.လုပ်ခဲ့တာ။ ငါတို့မြို့ ရဲ့ဖြစ်စဉ် ကို သေ ချာပြန်စဉ်းစား ကြည့်စမ်း။ မွတ်ဆလင် လူမျိုး ပိုင်တဲ့ ရွှေဆိုင် တစ်ဆိုင်ကို ဗမာလင်မ ယားနှစ်ယောက် က ရွှေလာရောင်းတယ်.။ ဒါကို ကလိမ်က ကျစ်ကျပြီး ရွှေခိုးတယ်၊ ဈေးနှိမ်တယ်.။ မကျေနပ် လို့ ပြန်ပြောတော့ ဆိုင်ရှင်မွတ်ဆလင်တွေက လူအုပ်စုနဲ့ ရွှေလာရောင်း တဲ့ ယောက်ျားကို ဝိုင်း.ထိုးတ ယ်၊ တုတ်နဲ့ ရိုက်တယ်၊ မိန်းမကိုကျတော့ ပါးရိုက်တယ်။ အဲဒီ ကနေ စဖြစ်တာ။ ဒီနေရာမှာ မင်း. ရော ခံရတဲ့သူသာဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲ၊ မင်း.ညီမ ဆိုရင်ရော မင်း.ဘာ လုပ်မှာလဲ။ ဆိုင်ရှင် ကုလားတွေကို ထိုင်.ကန်တော့ပြီး တောင်းပန်မှာလား။
ပြောလို့တော့ မရဘူးပေါ့ကွာ. မင်း.က ကုလားတွေ ရဲ့အထောက်အပံ့တွေ ယူနေတဲ့သူဆိုတော့ အဲလိုလုပ် ရင်လဲ လုပ်မှာပေါ့။ မင်း.မျက်နှာကိုမင်း. မှန်ထဲ ပြန်ကြည့် လိုက်အုံး နှာခေါင်းကချွန်ချွန်နဲ့ ကုလားရုပ် ပေါက်နေ တာ မင်း.သတိမထားမိပေမဲ့ မြင်တဲ့သူတွေ အကုန်သိတယ်။ ကြက်မှာအမျိုး လူမှာ အရိုး တဲ့.။ ဒီစကား မင်း.ကြားဖူးမှာပါ၊ ကုလားရုပ်ပေါက်နေတဲ့ မင်း.က ကုလားတွေဘက်က လိုက်ပြီး ပြော တာ မဆန်းပါဘူး ကွာ။ အရင်တုန်းကတော့ မင်း.ကို ၈၈ ကျောင်း သားခေါင်းဆောင်၊ ထောင်ထဲ မှာ အကြာကြီးနေခဲ့ ရတယ်ဆိုပြီး မင်း.ကို သနားပြီး ကိုယ်ချင်းစာခဲ့တာ။ အခုတော့ မင်း.က ကုလားဘက်ကလိုက်ပြီး အရှက်မရှိ ပြောဆိုနေလို့ ငါတို့မြို့ကလူတွေ မင်း.ကို လုံးဝကြည့် မရတော့ဘူး။ ကုလားကျွေးတာစားပြီး ကုလား စကား မပြောတတ်ပေမဲ့ ကုလားလူမျိုး ထိတော့ မင်း.က နာတတ်နေပြီပေါ့ ဟုတ် လား။ ဘာလဲ မင်း.က ကုလားတွေ ဆီက နောက်ထပ် အထောက် အပံ့ တွေ မရမှာကို စိုးရိမ်နေ လို့လား။ မင်း.တို့ မိတ္ထီလာ လာတုန်းက အပြေးမြန်သွားလို့ ကံကောင်း တယ်မှတ်ပါ. မဟုတ် လို့ကတော့ မင်း.ကိုယ့်လိပ်ပြာကို ဘယ်မှာရှာရမှန်းတောင် သိလိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့ အညာ သားတွေ ကုလား ဘယ်လောက်မုန်းလဲဆိုတာ မင်း.မသိသေးရင် ကျောက်ပန်းတောင်းကို သွားပြီး ကုလားအကြောင်း သွားပြောကြည့်။
အခုဖြစ်စဉ် မှာ မင်း.ငါတို့ဘက်က ကာကွယ်ပြီး ဘာပြောခဲ့လဲ၊ ဘာပြောရဲလဲ၊ မင်း.ပြောတဲ့ပုံစံက ငါတို့ကပဲ ငြိမ်ခံနေရမှာလိုလိုနဲ့၊ အဲဒီတုန်းက ငါတို့ဘက်က ရပ်တည်ပြီး ပြောခဲ့တာဆိုလို့ သီတဂူဆရာတော်ကြီး ပဲရှိတယ်။ မိတ္ထီလာက လူတွေက မင်းကို မင်းလာတဲ့နေ့က ည ၁၀ နာရီမထိုးခင် မိတ္ထီလာက အပြီးထွက် သွားဆိုလို့ မင်း. အရှက်မရှိ တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ ပြန်သွားခဲ့ရတယ် ဆိုတာကို မင်းအသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။
ဒီလ (၁) ရက်နေ့က ငါတို့ဆီကို ၈၈ ကျောင်းသားတွေ လာမယ်ဆိုလို့ မျှော်နေတာ. စောင့်နေတာ။ မင်း.များ ပါလာမလားလို့၊ မြအေးနဲ့ နီလာသိန်းတို့ပဲ ရောက်လာတာ။ မင်း.လိုက်မလာရဲတော့လို့ မလိုက်တော့ တာတဲ့.၊ မင်း. ပါမလာတဲ့အတွက် ငါတို့မြို့သားတွေ မချင့်မရဲဖြစ်နေကြတာ။ မင်း.ကို ဆုံးမချင် တဲ့ကောင်တွေ အများကြီး. ကျင်းတူး မြေမြှပ်စရာမလိုဘဲ အပျောက်ဖျောက်မလို့၊ မင်း.ကံကောင်း တယ်မှတ်၊ မင်း.သိအောင် ငါပြောလိုက်မယ်. မင်း. ဘယ်တော့မှ ငါတို့မိတ္ထီလာကို ကျော်ပြီးလာ ဖို့မစဉ်း စားနဲ့၊ တစ်သက် လုံး မင်း.မှတ်ထား၊ အသက်ချင်းလဲ ပစ်လိုက် မယ်။ ဗမာလူမျိုးအတွက် မင်းကိုသတ်ပြီး ကြိုးစင် တက်လိုက်မယ်။ မင်းကို ကုလားဘက်ပါလွန်းလို့ ငါတို့ မိတ္ထီလာ သားတွေက အဗ္ဗဒူလာမင်းကိုနိုင် ဆိုပြီး နာမည် ပေးထားတယ်...။
မင်း.ကို အရှင်ဝီရသူကလည်း ပြောနေပြီ. ကုလားလူ ဖြစ်နေပြီတဲ့. အဲဒါ အလကားပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ ကုလားတွေဘက်ကပဲ အမြဲတမ်းလိုက်ပြောနေလို့ မင်း.အပြောခံရတာ။ ဒီအချိန်က အပြောနဲ့တင် ရတဲ့အ ချိန် မဟုတ်တော့ဘူး၊ အလုပ်နဲ့ သက်သေပြမှ ယုံကြတော့တာ။ မင်း.လို သူများမကောင်းကြောင်း. ကိုယ်. ကောင်းကြောင်းလောက်သာ ပြောတတ်တဲ့ အပေါစား စကားလုံးတွေနဲ့ လျှောက်ပြောမနေနဲ့တော့. နားထောင် နေတဲ့လူတွေက မင်း.လို အရှက်မရှိ၊ အဆင့်မရှိတဲ့ခပ်တုံးတုံးလူတွေမဟုတ်တော့ဘူး။ ငါတို့ လူမျိုးတွေက ကောင်းရင် သူများထက် ကောင်းတယ်။ ဆိုးရင်တော့ သူများထက် ဆယ်ဆမက ဆိုး တယ်ဆိုတာ မင်း.ကောင်းကောင်း မှတ်ထားပါ. ။
သင်္ကြန်မှာ အဖော်အချွတ်ဝတ်မှ ခေတ်မီတာမဟုတ်ဘူး လို့ပြောတဲ့ ဆုရွှန်းလဲ့
Posted by drmyochit Friday, April 05, 2013, under အနုပညာ | No comments
သင်္ကြန်မှာ ဖက်ရှင် အလန်းတွေနဲ့ အဖော် အလျွတ် ၀တ်မှုတွေ အပေါ် အနုပ ညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဆုရွှန်းလဲ့က အခုလို ဝေဖန် အကြံ ပေးခဲ့ ပါတယ်။ “သင်္ကြန်မှာ အ၀တ် အစား ၀တ်ရင် အကြောင်း အကျား တွေ ၀တ်ရမယ်လို့ ဘယ်သူက သတ်မှတ် လိုက်တာလဲ မသိဘူး။ သင်္ကြန် ဆို အဲဒါတွေပဲ ၀တ်ကြတယ်။ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရင်လည်း အဲဒီလိုတွေ ရိုက်ကြ တာ စိတ်ညစ်တယ်။ အခု နောက်ပိုင်း သင်္ကြန် ဓါတ်ပုံတွေ တောင် မရိုက် ချင် တော့ဘူး။ ပြီးတော့ အဖော် အချွတ်တွေကို သင်္ကြန် ဖက်ရှင်အဖြစ် ၀တ်ရ မယ်လို့ ဘယ်သူကမှ အမိန့် မချထား ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေ ၀တ်မှ ပဲ သင်္ကြန်မှာ ခေတ်မီ တော့မယ့် ပုံစံ ဖြစ်နေတယ်။ တကယ်ဆို သင်္ကြန် မှာ ပိုပြီးတော့ လုံလုံခြုံခြုံလေး ၀တ်သင့်တယ်။ အသားအရေတွေ နေလောင် တာတို့၊ ရေဒဏ် ခံရတာတို့ ဖြစ်တတ်လို့ ကိုယ်တွေဆို ပိုပြီးတောင် လုံခြုံအောင် ၀တ်ပါတယ်။ သာမန် လူတွေ ၀တ်တာ ရိုင်းရင် သိပ်အပြော မခံရ ပေမယ့် အနုပညာရှင်တွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အဲဒီလို ၀တ်တာ တွေ့ခဲ့ရင် ပြောစရာတွေ ကျန်နေခဲ့ရော။ အဲဒီတော့ ဆင်ခြင် သင့်တယ်။ ပြီးတော့ အရက်သောက် ကြတာ တွေပေါ့။ သင်္ကြန်ဆို အရက်တွေ သောက်ကြရ မယ့် ရာသီလိုပဲ။ အပြိုင်အဆိုင် သောက်နေကြတာ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကိုယ့်ရိုးရာ သင်္ကြန်မှာ ပျော်ကြတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သရုပ်ပျက် ကြတာ တော့ မကောင်းဘူးလို့ ပြောချင်တယ်” လို့ ဆုရွှန်းလဲ့က သင်္ကြန်မှာ အဖော်အချွတ်တွေ ၀တ်တာတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး သူမက ဝေဖန် သွားပါတယ်။
Posted by drmyochit Friday, April 05, 2013, under သတင်းများ | No comments
မြန်မာ နိုင်ငံရှိ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်များ အရေးနှင့် ပတ်သက် ၍ ထောက်ခံသည့် နိုင်ငံများ ထဲတွင် အီရန် နိုင်ငံ သည် ဒေသတွင်း အာရပ် နိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ် ပါက ပိုမို ခိုင်မာသည့် အနေ အထား တရပ် တွင် ရှိနေပြီး ဦးဆောင် နိုင်ငံ တစ်ခုဖြစ် လာနေကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာဆန်းစစ်သူ Intifad Qanbar က အီရန်နိုင်ငံ အခြေစိုက်Press TV နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
နယူးယော့ခ် အခြေစိုက် လူ့ အခွင့် အရေး စောင့်ကြည့် လေ့လာ သည့် အဖွဲ့က မြန်မာ နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသ အချို့တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် ပဋိ ပက္ခများ အပေါ် သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာ ထွက်လာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် Qanbar က အထက်ပါ အတိုင်း မှတ်ချက်ပြု ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းက မြန်မာ နိုင်ငံတွင်းဖြစ် ပွားခဲ့ သည်များ အပေါ် နိုင်ငံ တကာ အသိုင်း အ၀ိုင်းမှ အဘယ့်ကြောင့် လစ်လျူ ရှုနေပါ သနည်း ဟူသော မေးခွန်း အပေါ် ပြန်လည် ဖြေကြား ခဲ့ရာတွင် အာရပ် နိုင်ငံများ အဖွဲ့ချုပ်နှင့် မွတ်ဆလင် အဖွဲ့ချုပ်တို့မှ ဦးဆောင်၍ နိုင်ငံ တကာ အဖွဲ့အစည်း များမှ မြန်မာ နိုင်ငံ အပေါ် ဖိအားပေး သွားရန် ကြိုးပမ်း ရမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ တွင်းရှိ မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင် များအား အကာ အကွယ် ပေးရေး ဆောင်ရွက် မှုတွင် အခြား အာရပ် နိုင်ငံ အများစုနှင့် နှိုင်းယှဉ် ပါက အီရန် နိုင်ငံနှင့် တူရကီ နိုင်ငံ တို့က ပိုမို ရပ်တည် ဆောင်ရွက် နေကြောင်း ပြော ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံ တကာ အသိုင်း အ၀ိုင်း အထူး အားဖြင့် အနောက် တိုင်းမှ ဘက်လိုက် ဆက်ဆံ မှုများ ရှိနေကြောင်း မွတ်စလင် များအပေါ် အကာအ ကွယ် ပေးရေး လုပ်ဆောင် မှုများကို အနောက် တိုင်းမှ ဆောင် ရွက်မည် မဟုတ် ကြောင်း လည်း ၎င်းက ထည့်သွင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
နယူးယော့ခ် အခြေစိုက် လူ့အခွင့် အရေး စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့သည် မြန်မာ အစိုး ရအား နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့်ဖြစ် ရပ်များ အတွက် စုံးစမ်း စစ်ဆေး မှုများ ပြုလုပ် ရန် တိုက်တွန်း ခဲ့ပြီး ဂြိုလ်တု ဓာတ်ပုံများ ထုတ်ပြန်ကာ မိတ်္ထီလာ မြို့တွင်းတွင် အနည်းဆုံး အဆောက် အအုံပေါင်း ၈၀၀ ထက်မ နည်း ဖျက်ဆီး ခံခဲ့ရ ကြောင်း ယင်း ဓာတ်ပုံ များ ကပြ သနေ သည် ဟု သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Ref:Press TV, South China Morning Post
Credit: Myanmartandawsint Newspaper
Posted by drmyochit Friday, April 05, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ပင်လယ် ဓါးပြများ၏ လက်ချက်ကြောင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ငါးဖမ်းသမား ၂၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၄ ဦးမှာ ယခု အချိန်ထိ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
လွန်ခဲ့သော (၂) ရက် အတွင်း နောက်ထပ် အလောင်း (၆) လောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် သေဆုံးသူ ငါးဖမ်းသမား အလောင်း ၂၇ လောင်းကို ရရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အာဏာပိုင်များက ပြောသည်။
သေဆုံးသွားသူ ငါးဖမ်းသမားများမှာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ စစ်တကောင်း ခရိုင် ဘန်ချာခါလီ ( Banshakhali) မြို့နယ်မှ ဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ပြင်သို့ သစ်သား ငါးဖမ်းစက်လှေ နှစ်စီးဖြင့် ငါးဖမ်း ထွက်စဉ် အသတ် ခံခဲ့ကြရသည်ဟု သတင်းများတွင် ဖေါ်ပြသည်။
ငါးဖမ်းစက်လှေ နှစ်စီးပေါ်တွင် လူပေါင်း ၃၁ ဦး ပါဝင်ပြီး လွန်ခဲ့သော တနင်္လာနေ့က ငါးဖမ်းရာမှ အပြန် တွင် ပင်လယ် ဓါးပြများ၏ စီးနှင်းမူကို ခံခဲ့ရသည်။
ဘင်္ဂလာ ပင်လယ်အော်တွင် ပင်လယ်ဓါးပြများ၏ တိုက်ခိုက်မူများ၊ ပြန်ပေးဆွဲမူများ မကြခဏ ဖြစ်ပေါ်နေ သော်လည်း ယခုကဲ့သို့ငါးဖမ်းသမားများကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်းမှာ ယခင်က မရှိခဲ့ဖူး ကြောင်း ဒေသ အာဏာပိုင်များက ပြောကြားသည်။
ယခုသတ်ဖြတ်မူ အကြောင်းအရင်းကို မည်သူမျှ တိတိကျကျ မပြောနိုင်သေးသော်လည်း ဓါးပြတိုက် သူများ အထဲမှ တစ်ချို့သည် မျက်နာသိများ ဖြစ်ရာမှ သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အသတ်ခံရသူ ဆွေမျိုး များက ခန့်မှန်း ပြောဆိုသည်။
Posted by drmyochit Friday, April 05, 2013, under မြန်မာသတင်းများ | 1 comment
အင်ဒို နီးရှား နိုင်ငံရှိ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ထိန်းသိမ်းရေး စခန်း တခု၌ မြန်မာနှင့် မွတ်စလင်များ အချင်း များ တိုက်ခိုက် မှုကြောင့် မြန်မာ ၈ ဦးသေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အင်ဒိုနီးရှားရှိ မြန်မာသံရုံးက အင်ဒိုနီးရှား အစိုး ရ တာဝန် ရှိသူ များထံ အချက် ၃ ချက်ကို တောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“မှန်မှန်ကန်ကန် တရားမျှတစွာ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးရန်၊(ဓား သို့မဟုတ် သေကြေစေသော ကိရိယာများ Detention Centre အတွင်း ရောက်ရှိနေရခြင်း အကြောင်းရင်း၊ Detention Centre ရှိ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် များ၏ စောင့်ကြပ် ထိန်းသိမ်းမှု အခြေအနေ)၊ စုံစမ်း ဖော်ထုတ်ချက်အရ အပြစ်ရှိသူများ၊ ပြစ်မှု ကျူးလွန် သူများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ထိထိရောက်ရောက် အပြစ်ပေး အရေးယူရန်၊ အင်ဒိုနီးရှားရောက် မြန်မာ နိုင်ငံသား များ၏ လုံခြုံရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုသွားမည်” ဟု နေပြည်တော် သမ္မတ ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးက သူ၏ အင်တာနက် ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆုမတြားမြောက်ပိုင်း ခရိုင်ရှိ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ထိမ်းသိမ်းရေး စခန်းတွင် အင်ဒိုနီးရှား ကမ်းခြေသို့ လှေဖြင့် ခိုးဝင်လာကြသော မွတ်စလင် ၁၀၀ ကျော်နှင့် တရားမ၀င် ငါးဖမ်းသည့် မြန်မာ ၁၁ ဦးတို့ကို အတူတူ ချုပ်ထား ခဲ့ကြောင်း၊ စခန်းတွင်း၌ အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် မြန်မာ ၈ ဦးသေဆုံးပြီး မွတ်စ လင် ၁၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း၊ နောက်ထပ် မြန်မာ ၃ ဦးမှာ ထိခိုက်မှုမရှိ လွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း နယ်မြေ ခံ ရဲချုပ် Enfro Kiswanto ကို ကိုးကားပြီး အေပီ သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အင်ဒိုနီးရှားရှိ မြန်မာသံရုံး၏ သံအမတ်ကြီးနှင့် သံရုံးဝန်ထမ်းများ အဆိုပါကိစ္စ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပေး ရန်အ တွက် အစည်းအဝေး ထိုင်နေကြောင်း သံရုံအမှုထမ်းတဦးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
“အခု ကျနော်တို့ အဲဒီကိစ္စပဲ အစည်းအဝေး ထိုင်နေပါတယ်” ဟု အဆိုပါ အမှုထမ်းက ဆိုသော်လည်း အသေးစိတ် ကိုမူ မသိရသေးပေ။
ရဲချုပ် Enfro Kiswanto က မျက်မြင်သက်သေများကို ကိုးကားပြောဆိုရာတွင် မွတ်စလင်များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာ သာ ဝင် ငါးဖမ်းသမားများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မကြာခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး အဓိကရုဏ်း ကိစ္စများကို အခြေခံပြီး အချင်းချင်း စကားများကြရာက တုတ်၊ ဓားများ ဆွဲကိုင်ကာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ဓားတွေ ဘယ်လိုရှိနေကြတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ အပါအဝင် အဖြစ်အပျက်ကို စုံစမ်းတုန်းပါ။ သူတို့ကို လာရင်းနေ ရပ်ဆီ မြန်မြန် ပြန်ပို့ပါတော့မယ်” ဟု ရဲချုပ် Enfro Kiswanto က အေပီ သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
ဒဏ်ရာရသူ၊ သေဆုံးသွားသူများကို ဘေလ၀န်မြို့တောင်ဘက် ၁၄ မိုင် ဝေးသော ခရိုင်မြို့တော်ရှိ မေဒင် ဆေးရုံ သို့ အရေးပေါ် ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့သော ထိမ်းသိမ်းရေး စခန်းတွင် ခိုလှုံခွင့်လျှောက်ထားသူ စုစုပေါင်း ၂၈၀ ကျော်နှင့် တရား မ၀င် ငါးဖမ်းမှု၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ နယ်နမိတ်အတွင်း ခိုးဝင်မှုများဖြင့် ဖမ်းဆီထားသူ မြန်မာများကို ထိမ်းသိမ်း ထားကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သည့်လက မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း မိတ္ထီလာမြို့၌ စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အဓိ ကရုဏ်း များသည် ပဲခူးတိုင်း အနောက်ခြမ်း မြို့နယ်တချို့သို့ပါ ကူးစက် ပြန့်ပွားသွားခဲ့ရာ ၄၃ ဦး သေ ဆုံးပြီး ရာနှင့်ချီသော အိုးအိမ်နှင့် ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ ပျက်ဆီး ဆုံးရှုံးခဲ့ကာ လူပေါင်း ၁ သောင်းကျော် ဒုက္ခသည် ဘ၀ ရောက် ခဲ့ကြရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ခြမ်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူအုပ်စုချင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားကာ အကြမ်း ဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော် သေဆုံးပြီး လူ ၁ သိန်းကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရ သည်။
အိန္ဒိယ နိုင်ငံတွင် လူတစ်ဦး၏ ပုဆိန်အသုံးပြုကာ ရမ်းကား တိုက်ခိုက် မှုကြောင့် လူပေါင်း(၉)ဦး သေဆုံး သွားကြောင်း သိရှိ ရသည်။ အိန္ဒိယ အလယ် ပိုင်း ဒေသရှိ ကျေးရွာငယ် တစ်ခုတွင် လူတစ်ဦးသည် ဒေါသ တကြီးဖြင့် ပုဆိန်ကို ဝှေ့ယမ်း ခုတ်ထစ်ခဲ့ရာ အမျိုးသမီး (၄)ဦးနှင့် မိန်းကလေးငယ် (၅)ဦး သေဆုံး ခဲ့ကြသည်။ ချာတစ်ဂါ့ရှ် ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သည့် ရမ်းကား သတ်ဖြတ်မှုတွင် တရားခံ၏ အမည်ကို ပန်ဒူ ရမ် ဟုသာ ရဲများက ဖော်ပြခဲ့ပြီး သတ်ဖြတ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းကို တိတိကျ ကျ မဖော်ထုတ် နိုင်သေးချေ။ ရဲများက လူသတ်သမားသည် စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ပြဿနာအချို့ ရှိနေသည်ဟု ယူဆရကြောင်း လည်း မှတ်ချက်ပြု ခဲ့သည်။
အသက်(၃၅)နှစ်ရှိ အမျိုးသားကို ၎င်း၏ ဇနီးက မကြာသေးမီကမှ စွန့်ပစ်သွားခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။ ယခုသတ် ဖြတ်မှုတွင် တရားခံသည် အမျိုးသမီးများကိုသာ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်သွားခဲ့သည်။ ရဲများက ယခု ကိစ္စ ဖြစ်ပွားချိန်တွင် ရွာအတွင်းမှ အမျိုးသားအားလုံး အလုပ်လုပ်နေကြပြီး အမျိုးသမီးများသာ ကျန်နေခဲ့ ချိန်ဟု ဆိုသည်။ ရဲများသည် တရားခံကို ဖမ်းဆီးကာ ၎င်း၏ လက်နက်ကိုလည်း သိမ်းယူ ထားလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက မိမိတို့ အနေဖြင့် သေဆုံးသူများ၏ မိသားစုများကို နစ်နာကြေး ရူပီးငွေ (၂၅၀၀၀၀)စီ [ဒေါ်လာ ၄၅၀ ဝန်းကျင်] ပေးအပ်သွားမည်ဟု ပြောကြားထားသည်။
ကျောက်တံတား တရားရုံး ရာကြီး ၁၀၄/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)ဖြင့် အရေုးယူထားသည့် ကိုရဲမင်းဦးအား မနေ့ က ရုံးထုတ် စစ်ဆေးပြီး အင်းစိန် အကျဉ်းထောင် ပြန်ရန် ခေါ်လာ စဉ် ကားနား အရောက်မှာ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိ ပါသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ကိုရဲမင်းဦးအား အင်းစိန် အကျဉ်းထောင် ပြန် ရန် ခေါ်လာစဉ် ရဲမြတ်ဟိန်း၊ ရဲမင်းအောင်၊ ချစ်ကိုလင်း၊ နိုနို(ခ) နွယ်နှင်းရီ တို့ အဖွဲ့မှ ကားတံခါးကို ပိတ်ဆို့၍ ကိုရဲမင်းဦးအား ၎င်းတို့ မေးမြန်း စရာ ရှိသည်များ မေးမြန်း ပြီးမှ သာ ကားပေါ် တင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း လူအုပ် စုဖြင့် တားဆီး ကန့်ကွက် ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက Myanamr News Now ကို ပြောပါသည်။
အဆိုပါ တားဆီး ကန့်ကွက်မှုကြောင့် ၎င်းတို့အား တရားခံ စောင့်ရှောက် နေသည့် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ တာဝန် ၀တ္တရား ဆောင်ရွက် နေသည်ကို တာဝန် မထမ်းဆောင် နိုင်အောင် တွန်းထိုး တားဆီး ကန့်ကွက် သဖြင့် ကျောက်တံတား စခန်းမှူး ရဲအုပ် သိန်းနိုင်မှ ကျောက်တံတား ရဲစခန်း (ပ) ၁၃၁/၅၀၆ ဖြင့် အရေးယူ ထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံးမှ တာဝန် ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားခဲ့ချက် အရ သိရပါသည်။
သစ်ထူးလွင် blog မှ ကူးယူ ဖော်ပြသည်။
တောင်နှင့် မြောက် ကိုရီးယား စစ်ဖြစ်ရင် မြန်မာများကို အစိုးရက ပြန်ခေါ်မည်
Posted by drmyochit Friday, April 05, 2013, under မြန်မာသတင်းများ | No comments
မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ တောင် ကိုရီးယား နိုင်ငံ အကြား စစ်ဖြစ်ပွားရင် မြန်မာ နိုင်ငံသား တွေရဲ့ အရေးကို ကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ တောင် ကိုရီးယား အစိုးရ တာဝန် ရှိသူတွေကို မြန်မာ သံရုံးက ပြော ကြား ပါတယ်။
မနေ့က တောင် ကိုရီးယား အခြေစိုက် မြန်မာ သံ အမတ်ကြီး ဦးညွန့် လှိုင် ဟာ တောင် ကိုရီးယား နိုင်ငံ အစိုးရ တာဝန်ရှိ သူတွေ နဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သံရုံးရဲ့ ဒုတိယ အတွင်း ၀န် ဒေါ်သင်းသင်းမြတ်က ရှင်းပြပါတယ်။
“မနေ့က သံ အမတ်ကြီးက တောင် ကိုရီးယား အစိုးရ တာဝန်ရှိ သူတွေနဲ့ သွားရောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပြီးပါပြီရှင်။ ကျွန်မတို့ သံရုံးထဲမှာ ဆိုရင်လည်း လုံခြုံရေးစီမံချက်တွေ ဆွဲထားပြီးပါပြီ။ မြန်မာ နိုင်ငံ အလုပ် သမား ၁ သောင်းကျော်နဲ့ ကျောင်းသား ၂၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ လက်ထပ် ထားတဲ့ အမျိုး သမီးကော ဆိုရင် ၁ သောင်းကျော်လောက်ရှိ တော့ အကုန်လုံး အတွက်ကို သံ အမတ် ကြီးက ဦးဆောင် ပြီးတော့ အစီ အစဉ် ဆွဲထားပြီးသားပါ။ တောင် ကိုရီးယား ဘက် ကလည်း အတတ် နိုင်ဆုံး သံတမန် နည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ ပြောထား ပြီးသားပါ“ လို့ ပြောပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံမှာ နှစ်စဉ် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား ၆ သောင်း လောက် ငှားရမ်းရပြီး မြန်မာ နိုင်ငံနဲ့ တောင် ကိုရီးယား အကြား အလုပ် သမား ငှားရမ်း ခွင့်ပြု စနစ် (အီးပီအက်စ်) နဲ့ ၂၀၁၂ ကုန်ပိုင်းမှာ စတင်ငှား ရမ်း တာပါ၊ ဒီနှစ်အတွက်လည်း မြန်မာ နိုင်ငံသား ၄၉၀၀ ကို ထပ်မံပို့ လွှတ်ဖို့ စီစဉ်ထားပြီး လာမယ့်မေလမှာ စာမေးပွဲဖြေ ဆိုဖို့ ပြင်ဆင် နေချိန်မှာ ခုလို ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံ အကြား စစ်ဖြစ်မယ့် အရိပ် အယောင် ဖြစ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ အရိပ်အခြေတွေကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံ တို့က စစ်ဖြစ်ရင် သူ့ နိုင်ငံသား တွေ ပြန်ခေါ် မယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို ခဲ့ကြ ပါတယ်။
အလားတူ မြန်မာ နိုင်ငံ အနေနဲ့လည်း ကိုယ့် နိုင်ငံသား တွေအကျိုး အတွက် ကူညီ မယ်လို့ ဆိုးလ်မြို့ အခြေစိုက် မြန်မာ သံရုံး ဒုတိယ အတွင်းဝန် ဒေါ်သင်းသင်းမြတ်က ရှင်းပြ ပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံ စစ်ဖြစ်မယ် ဆိုရင် ကိုယ့် နိုင်ငံသားတွေ ပြန်ခေါ်မှာလားဆိုတဲ့ မေးခြန်း ကိုတော့ ဒေါ်သင်းသင်းမြတ်က အတတ် နိုင်ဆုံး ကူညီ ပေးသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အကျိုးကို ကာကွယ်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတတ် နိုင်ဆုံးလေ။ ဒီဘက်မှာ သံရုံး ပေါင်း ၆၀ ကျော်ရှိတော့ တခြား သံရုံး ၅၀ ကျော်နဲ့တော့ တိုင်ပင် ဆွေးနွေး ပြီးတော့ လုပ်ထားတာ ရှိပါ တယ်။ ဒီက နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆွေးနွေး ထားသလို ကျွက်မတို့ မြန်မာ နိုင်ငံ ဘက်က အစိုးရ တွေနဲ့ ဆွေးနွေးပြီးတော့ အစီအစဉ်တွေ ဆွဲထားပြီးသားပါ” လို့ ဖြေပါတယ်။
တောင်အမေရိက ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွား
ဧပြီလ ၅ ရက် ၂၀၁၃
အာဆင်နယ် ကစား သမား များသည် ရော်ဘာ ကျည် ဆန် ထည့်ထား သည့် ပြောင်းတိုေ သနတ် များ ကိုင် ဆောင် ထားသော ဘရာဇီးလ် ရဲများ ကို ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ရာ ရဲများက တုတ်များ ကို ဝှေ့ယမ်းပြီး ဒိုင်းများ ဖြင့် ကာကွယ် ခဲ့ရ သည်။
အတောင်အမေရိကတွင် ပြုလုပ်သည့် ဘောလုံး ပွဲစဉ် တစ်ခု၌ ကစား သမား များ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ရဲများက ခုခံ ကာကွယ်ခဲ့ရကြောင်း သိရှိရ သည်။ တောင် အမေရိက တိုက်တစ်ခုလုံးဆိုင်ရာ ကလပ် အသင်း များ၏ အဆင့်အမြင့်ဆုံး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဖြစ်သည့် ကိုပါလီဘာတေးဒိုးစ် ဖလားပြိုင်ပွဲတွင် ဘရာဇီးလ်ကလပ် အက်သလက်တီကို မီနဲလ်ရိုးနှင့် အာဂျင် တီး နား ကလပ် အာဆင်နယ်တို့ ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့ကြသည်။
ပွဲအပြီးတွင် အိမ်ရှင် မီနဲလ်ရိုးက ဂန္ထဝင် ကြယ်ပွင့်ဟောင်း ရော်နယ်လ်ဒင်ဟို၏ (၂)ဂိုး အပါအဝင် (၅-၂)ဖြင့် အနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင်မူ အာဆင်နယ် ကစားသမားများက ဒိုင်ကိုမကျေမနပ် စောဒကတက် ပြဿ
နာရှာရာမှ ရဲများ ကွင်းထဲဝင်လာပြီးနောက် အခြေအနေ ရှုပ်ထွေးသွားခဲ့သည်။
အာဆင်နယ် ကစား သမား များသည် ရော်ဘာ ကျည်ဆန် ထည့် ထားသည့်ပြောင်း တိုသေနတ်များ ကိုင်ဆောင် ထားသော ဘရာဇီးလ် ရဲများကို ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ရာ ရဲများက တုတ်များကို ဝှေ့ယမ်းပြီး ဒိုင်းများဖြင့် ကာကွယ် ခဲ့ရသည်။
မြောက် ကိုရီး ယား နိုင်ငံ၏ လူမှုရေး ကွန်ယက် များအား အမည် မသိ အဖွဲ့ အစည်း တစ်ခုမှ 'Hack' လုပ်ခြင်း ခံခဲ့ ရကြောင်း သိရသည်။ Hacker များ၏ လုပ်ရပ် ကြောင့် မြောက် ကိုရီးယား၏ သတင်းဆိုက်(ဒ်)တစ် ခုဖြစ်သော 'Uriminzokkiri' ၏ ထုတ်လွှင့်မှု များ ပြတ်တောက် ခဲ့၍ 'Twitter' နှင့် 'Flicker' အကောင်း များ ဖျက်စီး ခံခဲ့ရသည်။ တက်္ကသိုလ် ကျောင်း သား တစ်သောင်း ငါးထောင်တို့၏ Username နှင့် Passwords များကိုလည်း တက္ကသိုလ် ကျောင်းရှိ Database များထဲမှ ရယူနိုင်ကြောင်း Hackers များမှ အခိုင် အမာပြော ကြားခဲ့ သည်ဟု BBC သတင်း ဌာနတွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
News From: Skynet TV Browser
Photo From: Notrth Korea Hack
ဘင်္ဂလီများ ဘက်မှ မကြာခဏ ဘက်လိုက်ပေးတက်သည့် မစ္စတာ ကင်တားနား မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မရှိသင့်တော့ ဟု ဦးသိန်းညွန့်ဆို
အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်စဉ်များ၏ နောက်ကွယ်တွင် လက်ရှိ အစိုးရ ပါဝင်ပတ်သတ်မှု ရှိသည်ဟု ပြောကြား ခဲ့ သော ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှည် မစ္စတာ သောမတ်စ်အိုဟေး ကင်တား နား သည် မြန်မာပြည်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မရှိသင့်တော့ဟု ယူဆ ကြောင်း ပြည် သူ့လွှတ်တော် ကိုယ် စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်က မြန်မာ့ခေတ်သို့ ပြောကြားသည်။
မတ်လအ တွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း အဓိကရုဏ်း အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များ၏
နောက်ကွယ်တွင် လက်ရှိအစိုးရ ပါဝင်ပတ် သတ်မှု ရှိသည်ဟု မစ္စတာကင်တားနားက မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ တွင် စွပ်စွဲပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ စွပ်စွဲပြောကြားချက်များနှင့် ပတ်သတ်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ပါတီသစ် ဥက္ကဌ ဦးသိန်းညွန့်က လက်ရှိ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလတွေမှာ မမှန်မကန်ရပ်တည်နေတဲ့ အင်အားစုတွေက ပေးတဲ့ အချက်အလက်တွေ မခိုင်မာတဲ့အချက်တွေနဲ့ စွပ်စွဲခြင်းဟာ အလွန်မှား ယွင်းသော လုပ်ရပ်ပါဟု ဆိုသည်။
“မစ္စတာ ကင်တားနားက ရှေ့နေတစ်ယောက်ပဲ။ ရှေ့နေဆိုတာ မှန်မှန်ကန်ကန် အချက်အလက် ယူသင့်ပါတယ်” ဟု ယင်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတွင် တားဆီးနေသူများ၊ မိမိအာဏာရရန် အတွက် ပြည် သူ့အ သက် အိုးအိမ်ကို ချနင်းရန် ဝန်မလေးသော သူများလည်း ရှိနေကြောင်း နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စများ သည် တိုင်းပြည်အေးချမ်းသာယာမှသာ လုပ်ဆောင်နိုင် ကြောင်း၊ အစိုးရမှာ လက်ရှိ အာဏာ ရှိနေ၍ ယင်းကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုးကို အဖြစ်မခံနိုင်ကြောင်း၊ ထို့အတွက် မြန်မာ့အရေးနှင့် ပတ် သတ် လာပါ က မှန်မှန်ကန်ကန် မသုံးသပ်နိုင်သော အချက်အလက်မှန်မှန်ကန်ကန် မရှိသော မစ္စတာကင် တားနား သည် မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မရှိသင့်တော့ပါဘူး ဟု ဦးသိန်းညွန့် က ပြောသည်။ မစ္စတာ ကင်တားနားသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရခိုင်အရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ အစီရင် ခံစာ တင်သွင်းရာတွင်လည်း ပြည်တွင်း အဖွဲ့အစည်းအများအပြား၏ ဝေဖန်ကန့်ကွက်မှု ခံခဲ့ရသေး သည်။
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ငြိမ်ချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ကချင် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ KIO တို့ ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့တွင် မြစ်ကြီးနား မြို့၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် စီစဉ် ထားသော် လည်း တက်ရောက်မည့် သူများ အဆင်သင့် မဖြစ်သေး၍ ဧပြီလ ၂၂ ရက် နောက်ပိုင်းတွင်သာ တွေ့ဆုံရန် ရွှေ့ဆိုင်း လိုက်ရကြောင်း မြန်မာ ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ MPC မှ ပြောသည်။
“အစိုးရနဲ့ KIO အဖွဲ့ နောက်ထပ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်မယ့်ရက်က သင်္ကြန်အပြီး ဧပြီ ၂၂ ရက် နောက်ပိုင်း၊ ၂၅ ရက် ဝန်းကျင် လောက်မှာ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်” ဟု MPC မှ ဦိးလှမောင်ရွှေ က ပြောသည်။
နောက်ဆုံး အကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် မတ်လ ၁၁ ရက် ရွှေလီဆွေးနွေးပွဲတွင် ဧပြီ ၁၀ ရက်မတိုင်မီ နှစ်ဖက်တွေ့ ဆုံရန် သဘောတူခဲ့ကြပြီး နှစ်ဘက်ညှိနှိုင်းကာ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့တွင် တွေ့ ဆုံကြ ရန် သဘောတူ ထားခဲ့ကြသော်လည်း KIO ဘက်မှ ဖိတ်ကြားထားသူများ ထိုရက်တွင် စုံညီစွာ မတက်ရောက် နိုင်သေး၍ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးလှမောင်ရွှေက ဆက်ပြောသည်။
“KIO အဖွဲ့အနေနဲ့ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီအဖွဲ့ (UNFC)နဲ့ UNFC မဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်း သား ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွေကော၊ International Observer (နိုင်ငံတကာ လေ့လာသူ) အဖွဲ့တွေ ကို လည်း ဖိတ်ကြားတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်တိုအတွင်းမှာ ဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်တာ ကြောင့် International Observer အဖွဲ့တွေထဲက အချို့က ၆ ရက်နေ့ အမီ မတက်ရောက်နိုင်တဲ့အတွက် နှစ်ဖက် တွေ့ဆုံ မှုကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာကို ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင် မင်းကို စာနဲ့ ဆက်သွယ် အကြောင်းလာပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့မှ ငြိမ်ချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်း ကော်မတီကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၂ ရက်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် ဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဝန်ကြီး ဦးအောင် မင်း ဦးဆောင်၍ KIO နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ လုပ်ခဲ့ရာ ယခုတွေ့ဆုံပွဲ ဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါက ပြည်တွင်းတွင် ပထမ ဆုံး တွေ့ဆုံမည့် ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်လာမည်ဟု နိုင်ငံရေး လေ့လာနေသူများက မှတ်ချက်ပြုသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ထိန်းသိမ်း ရေး စခန်းတခုမှာ မြန်မာနဲ့ မွတ် စလင် များ ဒီနေ့ အချင်းများ တိုက်ခိုက်ကြရာကနေ ၈ ဦးသေ ပြီး ၁၅ ဦး ဒဏ်ရာရတယ်လို့ AP သတင်း ဌာန က ဆို ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဆုမတြား မြောက်ပိုင်း ခရိုင်မှာ ရှိတဲ့ အဲဒီ ထိမ်းသိမ်းရေး စခန်းမှာ အင်ဒိုနီးရှား ကမ်းခြေ ကို လှေနဲ့ ခိုး ဝင်တဲ့ မွတ်စလင် ၁၀၀ နဲ့ ငါးခိုး ဖမ်း မှုကြောင့် အဖမ်း ခံရတဲ့ မြန်မာ ၁၁ ဦးကို အတူ တူ ချုပ်ထားခဲ့ကြောင်း နယ်မြေခံရဲချုပ် Enfro Kiswanto က ပြောပါတယ်။
ရဲချုပ်က မျက်မြင်သက်သေတွေကို ကိုးကားပြောဆိုတာကတော့ မွတ်စလင်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ငါးဖမ်း သမားတွေ ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး အဓိကရုဏ်း ကိစ္စေ တွကနေ စပြီး အချင်းများ ကြတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ တုတ်ဆွဲ ဓားဆွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
မြန်မာ ၈ ယောက်သေပြီး မွတ်စလင် ၁၅ ယောက် ဒဏ်ရာရပါတယ်။ တခြား မြန်မာ ၃ ဦးကတော့ အထိ အခိုက် မရှိ လွတ်သွားတယ်လို့ ရဲချုပ်က ပြောပါတယ်။
သေဆုံးသွားသူတွေကို ခရိုင်မှာရှိတဲ့ မေဒင် ဆေးရုံမှာ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
“ဓားတွေ ဘယ်လို ရှိနေကြ တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စအပါ အဝင်အဖြစ်အပျက်ကို စုံစမ်းတုန်းပါ။ သူတို့ကို လာရင်းနေ ရပ်ဆီ မြန်မြန် ပြန်ပို့ပါတော့မယ်” လို့ ရဲချုပ်က AP သတင်းဌာနကို ပြောထားတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်အမျိုးသမီးတေးသံရှင် ၅ ဦးရဲ့ Me N Ma အဖွဲ့ဟာ နယူးယောက်မြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ လေးကြိမ် မြောက် ကမ္ဘာပေါ်က အမျိုးသမီးများရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါဝင် ဖျော်ဖြေ ဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဧပြီလ ၄ ရက်နဲ့ ၅ ရက်နေ့ တွေမှာပြု လုပ်တဲ့ ဒီအမျိုးသမီးများရဲ့ အခမ်းအနားကို နံမည် ကြီး အနုပညာရှင်တွေ အပါအ၀င် ကမ္ဘာကျော် လူပုဂ္ဂိုလ် တွေ အများအပြား တက်ရောက်နေတာ ဖြစ်သလို ဒီလိုပွဲ မျိုးမှာ ပါဝင် ဖျော်ဖြေခွင့် ရတဲ့ အတွက် Me N Ma အဖွဲ့က အထူးဂုဏ်ယူတယ်လို့ ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ တ ကမ္ဘာ လုံးက အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အခုလိုပွဲမျိုးမှာ သူတို့အဖွဲ့ ဖျော်ဖြေဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပုံကို Me N Ma အဖွဲ့က အမွန်း က အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“အရမ်းပျော်ပါတယ်အမ။ အရမ်းကိုပျော်ပြီးတော့ ဂုဏ်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဒီလိုမျိုးပွဲမျိုးမှာ ဖျော်ဖြေဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ အိမ်မက်လည်း မမက်ဘူးပါဘူး။ ဒါအိမ်မက် လိုဖြစ် နေတယ် ညီမတို့အားလုံးအတွက်။ မနေ့က ညီမတို့ ရီဟာဇယ်သွားကြတယ် လင်ကွန်း စင်တာမှာ အရမ်း ကြီး ကို ကြီးကျယ်တဲ့ပွဲကြီးတစ်ခုပေါ့။”
အခုပွဲမှာ Me N Ma အဖွဲ့က သီချင်းတွေ ဆိုတာအပြင် အမေးအဖြေ ကဏ္ဍမှာ လည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Me N Ma အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကစလို အရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆင်ဆာ တင်းကျပ်မှု များခဲ့ချိန်က သူတို့ အဖွဲ့ ဘယ်လို ဖြတ်သန်း လှုပ်ရှားခဲ့လဲ၊ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက် စံပြဖြစ်ချင်တဲ့ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လတ်တလော ပြောင်းလဲ လာတဲ့ အခြေအနေ အဆုံး မေးမြန်းလာ နိုင်ဖွယ် ရှိတာတွေကို ဖြေသွားဖို့ သူတို့အဖွဲ့က ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ လည်း အမွန်း က ပြောပြပါတယ်။
Me N Ma အဖွဲ့ဟာ သူတို့နဲ့ တေးသံသွင်းစာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် လော့စ်အိန်ဂျဲ လိစ်မြို့ က Power Music အဖွဲ့နဲ့အတူ သီချင်းတွေ အသံသွင်းဖို့ အတွက်လည်း မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ ကတည်းက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေဟန် တွေကို သဘောကျတဲ့ Power Music အဖွဲ့က ဟောလိဝုဒ်မှာ သူတို့သီချင်းတွေကို ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချိ ဖို့ ကမ်းလှမ်း ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ အကြောင်းလည်း Me N Ma အဖွဲ့က ရှင်းပြပါတယ်။
သူတို့ အဖွဲ့ဟာ အနုပညာအပြင် လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ အမျိုးသမီး ဘ၀မြှင့်တင်ရေး လှုပ်ရှား မှုတွေ မှာလည်း တက်တက် ကြွကြွ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့တခုဖြစ်ပါတယ်။
" မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေပေါ့ အလုပ်မရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ ပညာ လည်း ကောင်းကောင်း မသင် ရဘဲ နဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာ၊ တချို့ ထောင် ကျပြီးတော့ အလုပ် လက်မဲ့ဖြစ်နေတာတွေကို မုန့်ဖုတ်တဲ့ သင်တန်း ပေးတယ်။ သင်ပေးပြီးရင် ပြန်ပြီးတော့ အလုပ်သွင်းပေးတယ်။ အဲ့လိုမျိုး NGO သဘောမျိုးပေါ့၊ အဲ့လို မျိုး ညီမတို့ Documentary သဘောမျိုး ရိုက်ပြီး ကူညီပေးခဲ့ဖူးတယ်။ အဖိနှိပ်ခံရတဲ့ မိန်းကလေး တွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ ဖွဲ့ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပေါ့။ အဲ့တာမှာလည်း အကူအညီပေးနေပါတယ်။ ကမ်ပိန်း တို့ ဘာတို့ပေါ့။ ဘစ်ကားပေါ်မှာ ယောက်ျားလေးတွေ ဟိုကြည့်ဒီကြည့် ကအစပေါ့။ ဝီဆယ်လ် လေးတွေ လိုက် ဝေတယ်။ တခုခုဖြစ်လာရင် မှုတ်ပြီး အကြောင်းကြားဖို့၊ အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေမှာ ညီမတို့ ကူညီကြ တာရှိ ပါတယ်။"
ကမ္ဘာအ၀ှမ်းက အမျိုးသမီးရေး လှုပ်ရှားသူတွေ ထောင်နဲ့ချီ တက်ရောက်တဲ့ Women in the World Summit လို့ခေါ်တဲ့ နယူးယောက်မြို့က အမျိုးသမီးဆွေးနွေးပွဲကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဟီလာရီ ကလင်တန်၊ အမေရိကန်ရဲ့ နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးရေးရာ သံအမတ်ကြီးဟောင်း Melanne Verveer စတဲ့ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေအပြင် နံမည်ကျော် တီဗွီဆွေးနွေးခန်း အစီအစဉ်တွေ ထုတ်လုပ် တဲ့ Oprah Winfrey၊ နံမည်ကြီး ဟောလိဝုဒ် အနုပညာရှင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Meryl Streep, Angelina Jolie စတဲ့ နံမည်ကျော် အနုပညာရှင်တွေ အများအပြားလည်း တက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်တုန်းက မန္တလေး တိုင်း မိတ္ထီလာမြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက် ဆူပူမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာဏာ ပိုင်တွေ က လူ အများ အပြား ကို ဖမ်းဆီးထားပြီး မကြာခင်မှာ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးဖို့ စီစဉ်နေ ပါ တယ်။ လူသေဆုံးမှုတွေ အိုးအိမ် အဆောက်အဦးတွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေ အကြီးအကျယ် ကြုံခဲ့ ရပြီး တော့နောက် ဒုက္ခရောက် ခဲ့ရ သူတွေ ကတော့ ယာယီ ခိုလှုံရာ စခန်းတွေမှာ နေထိုင်နေကြ ရ ဆဲပါ။ မိတ္ထီ လာမြို့ ရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ကိုအောင်လွင်ဦး က အပြည့်အစုံ တင် ပြပေး ထားပါ တယ်။
မကြာသေးခင်တုန်းက သွေးထွက်သံယို တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး တာဝန်ရှိသူတွေအဖြစ် သံသယ ရှိသူတွေ ကို အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးထားပြီး အစောဆုံး ဒီသီတင်းပတ်ထဲမှာ ရုံးတင်စစ်ဆေးတော့မှာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း မိတ္ထီလာ တရားရုံးက ပြောပါတယ်။ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ လူတွေထဲက ၄၀ ကျော်ကိုတော့ အခု အခါ အာဏာပိုင်တွေက ဆူပူမှုတွေနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ အမှုတွေနဲ့ ရုံးတင် စစ်ဆေးဖို့ စီစဉ်ထား တာလို့ လည်း မိတ္ထီလာမြို့က တရားရေးဝန်ထမ်း တဦးကပြောပါတယ်။
“အမှု အရေအတွက် ကတော့ ၁၁ဦးလောက် ရမန်ယူထားတယ်လေ။ ၁၁မှုယူထားတယ်။ လူပေါင်း ၄၁ယောက်၊ ကျမတို့က တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ ရုံးတင်တဲ့ဟာလောက်ပဲပေါ့နော့်။ ရမန်ယူထား တာလေ။ သူတို့က ၂၂ရက်နေ့ကစပြီး ရမန်ယူတာပေါ့နော်။ ၁၁ရက်နေ့အထိ။”
မိတ္ထီလာမြို့မှာ ဈေးရောင်းသူနဲ့ ဈေးဝယ်သူကြား စကားများရာက ပဋိပက္ခတွေ ကြီးထွားလာရာမှာတော့ အနီး အနားမြို့တွေ သာမက ပဲခူးတိုင်း အနောက် ဖက်ခြမ်းက မြို့အတော်များများအထိ ပျံ့ နံှ့ခဲ့တာပါ။ ဒီအ တွက် လည်း ပြဿနာတွေ အစပြုခဲ့တဲ့ ရွှေဆိုင်က ၀န်ထမ်း ၃ ဦးကိုပါ ဖမ်းဆီး ထားပြီး မနက်ဖြန် ရုံးထုတ်ဖို့ စီစဉ် ထား တယ် လို့လည်း မိတ္ထီလာမြို့က တရားရုံးဝန်ထမ်းကပြောပါတယ်။
သွေးထွက် သံယို ဆူပူမှုတွေ မိတ္ထီလာမြို့နယ် အနီးအနား ဒေသတွေကိုပါ ပျံ့နှံ့ကြီးထွားလာရာက အစိုးရက အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာပြီး အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းခဲ့တာပါ။ ဒီနောက်မှာတော့ စစ်တပ်အ ပါအ၀င် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ စောင့်ကြပ်မှုအောက် မိတ္ထီလာမြို့ရဲ့ အခြေအနေဟာ တည်ငြိမ်မှု ရှိနေပြီ လို့ အစိုးရပိုင် သတင်းစာတွေက ဖော်ပြပါတယ်။
မိတ္ထီလာမြို့ခံတယောက်ကတော့ အခြေအနေတွေဟာ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စပြု လာနေပေမဲ့ ဒေသခံတွေကြား စိုးရိမ်မှုတွေ ကတော့ လွှမ်းမိုးနေဆဲပဲ လို့ ပြောပါတယ်။
“မိထ္ထီလာဘက်က အခြေအနေကတော့ သူတို့ တပ်မတော်ဘက်က ကားတွေ ကတော့ ညပိုင်းတွေဆိုရင် လုံခြုံရေး အခြေ အနေ အရ ပတ်တော့ပတ်တယ်။ ကျနော်တို့ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ လူထုတွေကတော့ ကိုယ့်ရပ် ကွက်မှာ ကိုယ့် လမ်းထိပ် မှာ စောင့်နေကြ တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က အရင် လိုတော့ စောင့်ခွင့် မပေးတော့ ဘူး။ ရပ်ကွက်တရပ်ကွက်၊ လမ်းထိပ်တထိပ်ကို သုံးယောက်လောက် ပဲ စောင့်ခွင့်ပေး တယ်။ လောလော ဆယ် အခြေအနေကတော့ စိတ်ချရတဲ့ အခြေအနေလို့ ပြောလို့ရတယ်။ တပ်မတော်သားတွေ စောင့်ကြပ် လို့ ဈေးတွေ ဘာတွေတော့ ဖွင့်ထားပြီ။ ဒါပေမဲ့ လူထုတွေမှာတော့ စိုးရိမ်စိတ်လေးတွေ နည်းနည်း ကျန်နေသေး တယ်ခင်ဗျ။”
ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ သွေးထွက်သံယို ပဋိပက္ခအတွင်းမှာတော့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် အများစု အပါအ၀င် လူပေါင်း ၄၃ ယောက် သေဆုံးပြီး၊ ၁ သောင်းကျော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေ ရခဲ့ကြတာပါ။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဗလီ ကျောင်းတွေ အပါအ၀င် အဆောက်အဦးတွေ အိုးအိမ်အများအပြားလည်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ အ ကြောင်း အစိုး ရက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်း အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးကြရတဲ့ မူဆလင် အများအပြား ကတော့ မိတ္ထီလာမြို့က ယာယီ ခိုလှုံရာ စခန်းတွေမှာ နေထိုင်နေ ကြရဆဲဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပက ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ နဲ့ နေထိုင် နေကြရ တာပါ။ ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ မြို့ခံတွေကြား စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ အတွက်လည်း လုံခြုံ ရေး အာဏာပိုင်တွေက ဒုက္ခသည်တွေကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေ ရတယ်လို့ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အကူ အညီ ပေး နေတဲ့ မိတ္ထီလာမြို့ခံက ပြောပါတယ်။
“ဒုက္ခသည်စခန်း ခြောက်ခုဖွင့်ထားတယ်ခင်ဗျ။ ဒုက္ခသည်စခန်းခြောက်ခုမှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ အကုန်လုံး၊ အရင်တုန်းက လူတွေရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ တချို့ မြို့ထဲက ရပ်ကွက်အနည်းစုမှာ ကျန်နေတဲ့ သူတွေ ကိုလည်း ကျိုကြား ကျိုကြား ကျန်နေသေးတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုလည်း တပ်မတော် နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေ၊ ရပ်ကွက်က အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပေါင်းပြီး တော့ မင်းတို့ အိမ်တွေမှာ နေခွင့် မပေးဘူး။ မင်းတို့ မနေရဘူးဆိုပြီး လိုက်လံခေါ်ထုတ်ပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲ ပြန်ပို့နေရ တာတွေ လည်း ရှိနေသေးတယ်။”
မိတ္ထီလာမြို့က ပဋိပက္ခတွေရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာလည်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အစ္စလာမ် ဘာသာရေး ကျောင်း မီးလောင်ပြီး ကလေး ၁၃ ယောက်အထိ သေဆုံးခဲ့တဲ့ အတွက်လည်း လုံခြုံရေးတွေ တိုးမြှင့် ခဲ့တာပါ။ ဒီမတိုင်မီမှာလည်း ဘာသာရေး အခြေခံတဲ့ ဆူပူမှုတွေဖြစ်ပွားအောင် လှုံ့ဆော်မှု တချို့ ရှိခဲ့ တဲ့ အတွက် အခုအခါ အာဏာပိုင်တွေက မြို့ခံတွေကို လုံခြုံရေးအတွက် သတိရှိကြဖို့ နှိုးဆော် ထားတဲ့ အကြောင်း ရန်ကုန်မြို့က စာရေးဆရာ မောင်သွေးသစ် ကပြောပါတယ်။
“ ကိုယ်ရပ်ကွက် ကိုယ်တာဝန်ယူ ဆိုတာက အရင်တုန်းက ၈၈တုန်းကလိုပဲ ပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်လမ်းမှာ ကိုယ်လုပ် တဲ့ အခါ ကျတော့ လူစိမ်းသူစိမ်း ဝင်လာရင်လည်း သိတယ်ပေါ့ဗျာ။ တာဝန်ယူပါ ဆိုတာကတော့ ဖိအား ပေးတဲ့ သဘောမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ များသောအားဖြင့် ကိုယ့်ရပ်ကွက်တွေ ကိုယ် ညဘက် ကိုပေါ့ဗျာ။ ယူဖို့ပေါ့ဗျာ။ ယူတဲ့အတွက် မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်ဘူးပေါ့။ နောက် ညကြီး သန်းခေါင် လူစိမ်းဝင်လာရင်လည်း သိတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါ ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ သဘောပဲဗျ။”
ရန်ကုန် ၄၈ လမ်း မီးလောင်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ တာဝန်ရှိသူတချို့ကိုတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့က စစ်ဆေးမေးမြန်းနေပြီး ရန်ကုန် တိုင်း အစိုးရကတော့ အဖွဲ့ဝင် ၇ ဦး ပါဝင်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့တဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။ အလား တူ မိတ္ထီ လာမြို့က ဆူပူမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း လုံခြုံရေးနဲ့ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ကျော် မျိုး ဦးဆောင်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် တရပ်ကို ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လာမယ့် ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ ကျပ် ၁၅၀၀ နဲ့ စတင်ရောင်း ချပေး မယ့် မိုဘိုင်းဖုန်း ဆင်းမ်ကဒ်တွေကို ပြည်သူတွေ လက်ဝယ် အရောက် ရောင်းချ နိင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ မြန်မာ့ ဆက် သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနတို့ ညှိနှိုင်း နေကြပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါ တယ်။
ပြည်သူတွေလက်ထဲ ဆင်းကဒ် ၃ သိန်းခွဲကို လစဉ်လတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့တွေကနေ ရောင်းချပေး ဖို့အတွက် တာဝန်ပေး လိုက်ခြင်းဖြစ် တယ်လို့ သမ္မတရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က RFA ကို ပြောပါ တယ်။
"တိုင်းဒေသကြီး အစီအစဉ်နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာလဲ ဆက် သွယ်ရေး နဲ့ ညှိ အုံးမှာပါ၊ တိုင်းဒေသကြီး အစီအစဉ်နဲ့ လို့တော့ ပြောထား တယ်၊ ကျွန်တော်တို့တွေ လိုအပ်တာကတော့ တကယ်သုံးတဲ့ သူတွေလက် ထဲကိုရောက်ဖို့ပဲ ပြောထား တာရှိပါတယ်၊ အဲ့ဒီမှာလုပ်မယ့် အစီအစဉ်တွေကို ပြန်တင်မှာပါ၊ လောလော ဆယ်တော့ သူတို့ လုပ် မယ့် အစီအစဉ်တွေကို မသိရသေးပါဘူးဗျာ၊ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကတော့ လိုင်းအရေ အတွက် နဲ့ လူဦးရေ အရေအတွက်အပေါ် မူတည်ပြီးတော့ လစဉ်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရဆီကို ခွဲတမ်းနဲ့ပေး သွားမယ်၊ တိုင်းဒေ သကြီး အစိုးရတွေက အမှန်တကယ်လိုချင်တဲ့သူတွေလက်ထဲကို ပြန်ပြီးရောင်း ချပေးသွားမယ်"
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးကို RFA က ဒီကနေ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ ခုလိုဆင်း ကဒ်တွေကို ပြည်သူတွေလက်ဝယ်အရောက် ဘယ်လိုအစီအစဉ်နဲ့ ဖြန့်ဖြူးမလဲဆိုတာနဲ့ ပတ် သက်ပြီး အစည်းအဝေးလုပ်နေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက် အသေးစိတ်မပြောနိုင်သေးကြောင်း တာဝန်ကျ အရာရှိ တစ်ဦးက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီဖုန်းဆင်းမ်ကဒ် တွေ ကိုတော့ ကနဦးဖုန်းခေါ်ဆိုခ ကျပ် ၃၀၀ ဖြည့်သွင်းပေးထားမှာဖြစ်ပြီး ၁၅ ရက်အ တွင်းမှာ ဖုန်းပြော ဆိုခ ကျပ် ၅၀၀၀ တန် ငွေဖြည့်ကဒ်ကို ထပ်မံဖြည့်သွင်း အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကယ် လို့ ၁၅ ရက်အတွင်းမှာ ထပ်မံအဖြည့်သွင်းဘူးဆိုရင်တော့ အလိုအလျှောက် ပြန်လည် ပိတ်သိမ်း သွားမှာ ဖြစ် တယ်လို့လည်း နိုင်ငံပိုင် သတင်းမီဒီယာတွေက ဖော်ပြထားတာပါ။
ဖုန်းပြောဆိုခ တစ်မိနစ်ကို ကျပ် ၅၀ သတ်မှတ်ထားပြီး အဝင်ဖုန်းလက်ခံ ပြောဆိုခကိုတော့ ကောက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး လို့ သိရပါတယ်။
၄၈ လမ်း ဗလီမီးလောင်မှုတွင် အဓိက တာဝန်ရှိသည့် ဗလီဆရာ နှစ်ဦးအနက် လွတ်မြောက်နေသူ တစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိပြီးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေ
၄၈ လမ်းထိပ်တွင် လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ဧပြီလ ၃ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက တွေ့ရစဉ်
ဧပြီလ ၂ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ၄၈ လမ်း ဗလီမီးလောင်မှုတွင် အဓိက တာဝန်ရှိသူဟုဆိုသူ ဗလီဆရာ ဦးဇေယျာဖြိုး နှင့် ဦးခင်မောင်အေး တို့ နှစ်ဦးအနက် လွတ်မြောက်နေသူ ဦးခင်မောင်အေးအား ဧပြီလ ၃ ရက်က ဖမ်းဆီး ရမိပြီး ဆက်လက် စစ်ဆေးလျက် ရှိကြောင်း ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး စိန်ဝေ က Eleven Media Group သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဗလီအနီးတစ်ဝိုက်တွင် အများပြည်သူ လုံခြုံရေးအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့ နယ် ရှိ ရပ်ကွက်များမှ လမ်းလုံခြုံရေးများကို ဆက်လက်ထားရှိထားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး စိန်ဝေက ဆိုပါ သည်။
"၄၈ လမ်းရဲ့ ဟိုဘက်ထိပ် ဒီဘက်ထိပ်ရယ် ဗလီရှေ့ရယ်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အားလုံးပေါင်း ၄၅ ယောက် ထားရှိ ပြီး လုံခြုံရေး ရယူထားပါတယ်။ ရပ်ကွက်လုံခြုံရေးက တစ်ရပ်ကွက်ကို နှစ်ယောက်နှုန်းနဲ့ ဗိုလ်တစ် ထောင်မြို့ နယ်က ၁၀ ရပ်ကွက်ရယ်၊ မီးလောင်တဲ့ ရပ်ကွက်က ၁၀ ယောက်လောက်ရယ်ဆိုတော့ အားလုံးပေါင်း ၂၈ ဦးလောက်တော့ ရှိပါမယ်" ဟု ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး စိန်ဝေက ပြောကြား ခဲ့သည်။
မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားချိန်က ဗလီ၏ အောက်ထပ်တွင် ထားရှိသည့် မီးအားမြှင့်စက်များကို ဗလီ တာဝန် ရှိသူများမှ မည်ကဲ့သို့ အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းနှင့် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားချိန်တွင် တံခါးများကို အချိန်မီ မဖွင့်နိုင် ခဲ့သော ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်းနှင့် အသေးစိတ် သတင်း အချက် အလက် များကို အထက်အရာရှိများက ဆက်လက် ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး စိန်လွင် က ဆက်လက်ပြော ကြားသည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် စာသင်သား ကလေးငယ် ၁၃ ဦး သေဆုံးခဲ့သော ဗလီမီးလောင်မှုတွင် မီးအားမြှင့် စက် အပူလွန်ကဲရာမှ မီးလောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် အခင်းဖြစ်ပွားရာရှိ ဗလီဆရာ နှစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးဇေ ယျာဖြိုးနှင့် ဦးခင်မောင်အေး တို့တွင် တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေ က ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယားအား တုံ့ပြန် တိုက်ခိုက်ရန် အမေရိကန်ပြင်ဆင်မှုများ
လာမယ့် သီတင်းပတ်တွေ အတွင်းမှာ အမေရိကန် ခေတ်မှီ ဒုံးကာကွယ်ရေး စနစ်တွေကို ပစိဖိတ်ဒေသ မှာ ပြင်ဆင် ချထား ဖို့ ရှိတယ်လို့ အမေရိကန် စစ်ဘက် အရာရှိတွေက ပြော ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားဘက်က ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်နဲ့ တိုက်ခိုက် လာချေ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို ကာကွယ် ဖို့ အတွက် ကြိုတင် အစီအမံ တရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ ဒုံးကာကွယ်ရေး စနစ်ကို အမေရိကန် ပြည်ထောင် စု ပိုက်နက်ဖြစ်တဲ့ Guam ကျွန်းမှာ အခြေ တည် ထားမှာ ဖြစ်တယ် လို့ ပန်တဂွန် ပြောခွင့် ရ အမျိုးသမီးက မနေ့တုန်းက ပြောပါ တယ်။
Guam ကျွန်းဟာဆိုရင် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် အရှေ့တောင် ဘက် ကီလိုမီတာ ၃ ထောင် အဝေးမှာ တည်ရှိ တာပါ။ အဲ့ဒီ ဒုံးကာ ကွယ်ရေး စနစ်တွေကို ဘယ်တော့ စတင်ထားရှိမလဲ ဆို တာတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေး ပါဘူး။
မြောက် ကိုရီးယား အပေါ်မှာ နိုင်ငံတကာရဲ့ ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှုသစ်တွေ ချမှတ်ခဲ့ တာကြောင့်၊ ဒေါသ တကြီး ဖြစ်နေတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင် စုနဲ့ တောင် ကိုရီးယား နိုင်ငံတွေ ကို သီတင်းပတ် နဲ့ချီကြာ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာပဲ ပန်တဂွန်က အခုလို ကြေညာချက် ထွက်လာတာပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင် စု အပေါ်မှာ အမှန် တကယ် ပြင်းထန်ပြီး တန်ပြန်စစ်တွေ ဆင်နွှဲသွား မယ်လို့ မြောက်ကိုရီးယား စစ်တပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပြောဆိုတာကို ကိုးကားပြီးတော့ မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရပိုင် သတင်းတွေက အခု ကြာသာ ပတေးနေ့ အစောပိုင်း မှာ ကြေညာပါတယ်။
နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မှီ နျူကလီးယား လက်နက်တွေကို အသုံးပြုမယ်ဆိုတာက လွဲပြီးတော့၊ အသေးစိတ် ကိုတော့ မကြေညာပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုန်းကတော့ ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် မြောက် ကိုရီးယား ဘက်ခြမ်း က ပူးတွဲ စက်မှုဇုန် ကို တောင်ကိုရီးယား လုပ်သားတွေ လက်ခံထားတာကို မြောက် ကိုရီးယား ဘက်က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တုန်းက စပြီး တားမြစ် ပိတ်ပင်လိုက်ပါပြီ။ ဒါဟာ နှစ်နိုင်ငံအကြားမှာရှိတဲ့ ပူးပေါင်း ဆက်ဆံ မှု နောက် ဆုံး အခြေအနေကို ထိခိုက်သွားစေပါတယ်။
" အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းမှုများကြောင့် အိန္ဒိယသို့ အမျိုးသမီးဧည့်အဝင် လျော့နည်း "
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့် မှုများ ဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီးနောက် သုံး လတာကာလ အတွင်း နိုင်ငံခြား သား အမျိုး သမီးများ အိန္ဒိယသို့ လာရောက် လည်ပတ် မှုနှုန်း ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်ကျဆင်း သွားကြောင်း စစ်တမ်း တစ်ရပ်က ဖော်ပြထားသည်။ အိန္ဒိယ ကုန် သည်ကြီးများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းရှင် များအ သင်း (ASSOCHAM) ၏ စစ်တမ်း တွင် အ ထက် ပါ အတိုင်းဖော်ပြထားပြီး တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် အမျိုး သမီး ခရီးသည် လည်ပတ် မှုနှုန်း ၂၅ ရာ ခိုင်နှုန်း အထိ လျော့ကျနေကြောင်း ပါရှိသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက နယူးဒေ လီမြို့တော် တွင် ဘတ်စကားတစ်စီးပေါ်၌ အမျိုး သမီး တစ် ဦး အား လူခြောက်ယောက် က အုပ်စုဖွဲ့ မုဒိမ်းကျင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း အခြားဒေသ များတွင်လည်း အလားတူဖြစ် ရပ်မျိုး ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ထို့အတူ ပြီးခဲ့သည့်လကလည်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသူ တစ်ဦး လည်း အုပ်စုဖွဲ့မု ဒိမ်းကျင့်ခံခဲ့ရရာ နိုင်ငံခြား သားအမျိုးသ မီးများအဖို့ အားလပ်ရက် အပန်းဖြေရန် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အစား ထိုင်းနှင့် မလေးရှား တို့ကဲ့သို့ သော နိုင်ငံ များအား ပိုမိုရွေးချယ် လာကြ သည်ဟု စစ်တမ်း က ဖော်ပြ ထားသည်။
နိုင်ငံတကာမှ ခရီးသွားအကြံပေးအေဂျင်စီများကလည်း ၎င်းတို့ ၏ ဧည့်သည်များအား အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက် ၍ သတိပေးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး ယင်းအချက်များသည် အိန္ဒိယ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအား အထိ နာစေလိမ့် မည်ဟု သတိပေးထားသည်။ ယခုစစ်တမ်းကောက်ယူသည့် သုံးလတာကာလအတွင်း အမျိုးသမီး ခရီးသည် ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းက အိန္ဒိယခရီးစဉ်အား ပယ်ဖျက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
မြောက် ကိုရီးယားက သူ့ရဲ့ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေကို အမေ ရိကန်ကို တိုက်ခိုက်ရေး အတွက် အမိန့် ပေး အတည်ပြု ပြီးပြီလို့ ဆိုလိုက်ပြီး လိုအပ်ရင် နျူးကလီးယား လက်နက်ကို အသုံးပြုဖို့ပါ မီးစိမ်းပြထား တယ်လို့ လည်း ဆိုနေ ပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ မြောက် ကိုရီး ယားဟာ သူတို့ရဲ့ မစ်ဇိုင်း ဒုံး တလုံးကို အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်းဘက်ဆီ
ရွှေ့ပြောင်း လိုက်တယ် လို့လည်း တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက သတိပေး ပြောဆို ပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကလည်း ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာထဲမှာ ရှိတဲ့ ဂွမ် ကျွန်းငယ် ပေါ်မှာ မစ်ဇိုင်း ကာကွယ်ရေး စနစ် ရွှေ့ပြောင်း ထားပြီလို့ တုန့် ပြန် ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။
ဂွမ်ကျွန်းဟာ မြောက် ကိုရီးယားက ကြေညာ ထားတဲ့ ပစ်မှတ်တွေ ထဲက တခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ဗြိတိန် သံ အမတ်ကြီး တာဝန်ယူ ခဲ့ဖူးသူ ဗြိတိန် သံအ မတ်ကြီး John Everard က သူ့အနေနဲ့ တော့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်လာ လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပြီး ထင်စရာ အကြောင်း တချို့ ကလည်း
ပထမ အချက်က အရင် တုန်းကလည်း တဘက်နဲ့ တဘက် အပြန် အလှန် ခြိမ်းခြောက်မှု တွေရှိခဲ့ဖူး ပေမဲ့ ဒီ တခါလောက် ပြင်းပြင်း ထန်ထန် မဖြစ်ခဲ့ ဖူးဘူး ၊ နောက် ဒုတိယ အချက်က အရင်တုန်း က မြောက် ကိုရီး ယားရဲ့ ခြိမ်းခြောက်တဲ့ ကြေညာ ချက်တွေဟာ ထိပ်ဆုံး ခေါင်းဆောင်နဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်မှု မရှိခဲ့ ဘူးပဲ အရင် တုန်းက ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံမှုတွေမှာ သူတို့ရဲ့ ကြေညာ ချက်တွေကို နိုင်ငံခြား ရေး ဝန်ကြီး ဌာန အဆင့် ကပဲ လုပ်လေ့ ရှိပေမယ့် ခု တခါမှာတော့ မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင် ကိုယ်တိုင်က လုပ်တာ ကြောင့် ဒါဟာ မြောက် ကိုရီးယား ဘက်က ကြည့်ရင် ထူးခြားတဲ့ အချက် ဖြစ် သလို တရုတ်ရဲ့ ပြုမူပုံဟာလည်း ဒီတခါ ခါတိုင်းနဲ့ မတူဘဲ ထူးခြား နေတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
မနေ့က တရုတ် ရုပ်မြင် သံကြားတွေမှာ သတင်း ထုတ်လွှင့် သွားချက်အရ၊ တရုတ် တပ်ဖွဲ့တွေကို မြောက် ကိုရီး ယား နယ်စပ်မှာ ရွှေ့ပြောင်း နေရာ ချထား တယ်လို့ ထုတ်ပြန် သွား ပါတယ် ၊ ဒါဟာ ဘာကြောင့် ဒီလိုရွှေ့ပြောင်း နေရာ ချထား တယ်လို့ မပြောပေမဲ့ ဒီအပြုအမူဟာ ထူးခြား တယ်လို့ ဗြိတိန် သံ အမတ်ကြီးဟောင်း က ရှင်းပြ ခဲ့ပါတယ်။
မြောက် ကိုရီးယားက ဘာကို ဒီလောက်တောင် မကျေမနပ် ဖြစ်နေ တာပါလဲ ၊ အနောက် နိုင်ငံတွေက ပိတ်ဆို့ အရေး ယူမှုတွေ လုပ်တဲ့ အတွက် သူတို့က ဒီလို တုန့်ပြန်မှုဟာ ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်ပါရဲ့ လားလို့ ဘီဘီစီက မေးတဲ့ အခါမှာတော့ ဗြိတိန် သံ အမတ်ကြီး ဟောင်းက တခြား လူတွေ အတွက် အကြောင်းပြ ချက် မခိုင်လုံပေမဲ့ သူတို့အတွက်တော့ ခိုင်လုံတယ် ၊ သူတို့ အမြင်မှာ သူတို့ဟာ ရန်ရှာ ခံရ သူလို့ ယူဆနေပုံ ရပြီး သူတို့ကို အမေရိကန် က ခြိမ်းခြောက်နေ တယ်လို့ သူတို့ မြင်ကြောင်း ၊ တကယ်လို့ သူတို့ အနေနဲ့ နျူကလီးယား လက်နက် ကို စွန့်လွှတ် လိုက်ရင် အမေရိကန်က သူတို့ကို လစ်ဗျားနဲ့ အီရတ်ကို လုပ်သလို လုပ်မှာပဲလို့ သူတို့ စိတ်ထဲမှာ မှတ်ယူ ထားပါတယ်လို့ သံအ မတ်ကြီးက ပြောပါတယ်။
သူတို့မှာ နျူးကလီးယား မရှိရင် အမှန် တကယ် အကျူးကျော် ခံရမှာ ပဲလို့ သူတို့ အစစ် အမှန် စိုးရွံ့ နေတယ် ထင်ပါ သလားလို့ ဘီဘီစီက မေးတဲ့ အခါမှာ သံ အမတ်ကြီးက ကျူးကျော်မှာ ဒါမှ မဟုတ် သူတို့ အစိုး ရကို အမေရိ ကန်က ဖြုတ်ချဖို့ ကြိုး စားမှာကို သူတို့ စိုးရိမ် ပါတာ ဖြစ်တယ် ၊ အခုလုပ်တဲ့ ပိတ်ဆို့ မှုတွေဟာ သူတို့ အတွက် တကယ် အထိနာ နိုင်တာတွေကြောင့် မြောက်ကိုရီးယား အသက်ရှူကြပ် သွားမှာကို သူတို့ စိတ်ပူ ပါတယ်လို့ သံ အမတ်ကြီးက ဖြေကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီတကြိမ်မှာ အမှန်တကယ် စစ်ဖြစ်ပွား လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ် ရှိတယ်လို့ သံ အမတ်ကြီး အနေနဲ့ ထင်ပါ သလားလို့ ဘီဘီစီက နောက်ဆုံး မေးခွန်း အနေနဲ့ မေးတဲ့ အခါမှာ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတယ်လို့ သူထင် ကြောင်း သံ အမတ်ကြီးက ပြောသွား ပါတယ်။
၂၀၁၅ တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်ရေး ခက်ခဲဖွယ်ရှိ
ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု များနှင့် အတူ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ အဓိက အတိုက် အခံ ပါတီ ဖြစ်သော အမျိုးသား ဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီသည် နှစ်ပေါင်း၂၅ နှစ် သက်တမ်း အတွင်း ပထမ အကြိမ် နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ပါတီ ညီလာ ခံကို မတ်လ ၈ ရက်မှ ၁၀ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပခဲ့ ပါသည်။
ညီလာခံ ကျင်းပ ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပါတီအတွင်း အကွဲ အပြဲပြ ဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်နှင့် အသက် အရွယ် ကြီးရင့်သည့် ပါတီဝင်များနေရာတွင် လူငယ်များဖြင့် သွေး သစ်လောင်း ရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် သည် ပါတီဥက္ကဌအဖြစ် ပြန်လည်တင်မြှောက်ခံရပြီး NLD ပါတီသည် ဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်နှင့် ဆန့်ကျင်မှုရှိသည့် လက်ရှိအခြေခံဥပဒေအား ပြင်ဆင်ရေးကို ဆက်လက် တောင်းဆို သွား မည်ဖြစ် ကြောင်း၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုခိုင်မြဲစေရန်နှင့် ကချင်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်များတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခ များကို ဖြေရှင်းရန် တွန်းအားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံ တွင် ဖော်ပြခဲ့ သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် NLD ပါတီ သည် နိုင်ငံ တကာ အဖွဲ့ အစည်း များနှင့် မြန် မာပြည် သူလူထု၏ ထောက်ခံမှုပိုမိုရရှိရန် တက်ကြွစွာ ကြိုးစားနေသည်ကို ပါတီ ညီလာ ခံက ဖော်ပြနေ ပါသည်။
သမ္မတရာထူးတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်သူမ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဒေါ်စုကြည်က ထပ်မံဖော်ပြခဲ့ ပါသည်။ ပြည် သူ များကသာ ဒေါ်စုကြည်အား သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်ပါက ၎င်းအနေဖြင့် လက်ခံ မည်ဖြစ် ကြောင်း လက် ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှုရှိခဲ့လျှင် ဒေါ်စုကြည်နှင့် ၎င်းဦးဆောင်မှု အောက်တွင် ရှိသည့် NLD ပါတီက အောင်ပွဲခံနိုင်လိမ့်မည်ဟု ပြည်သူအများစုက ယူဆထားကြပါသည်။
ဒေါ်စုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်ခံရပြီး ပြည်သူလူထု အကြား တွင် နာမည်ဂုဏ်သတင်း ကြီးသူ လည်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏မိန့်ခွန်းများမှာ နားထောင်သူပေါင်း များစွာ ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး သူ့သတင်းမှာလည်း သတင်းစာများ၏ ရှေ့စာမျက်နှာတွင် မကြာခဏ ဖော်ပြခြင်းခံရ ပါ သည်။
ဒေါ်စုကြည်မှာ နိုင်ငံတကာနယ်ပယ်တွင်လည်း ကျော်ကြားပြီး နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်များသို့ ၎င်းသွား ရောက် သည့် အခါတွင် နိုင်ငံ့အကြီးအကဲများအား ကြိုဆိုသကဲ့သို့ သူမအားကြိုဆိုကြသည်။
ဒေါ်စုကြည်၏ သြဇာအောက်တွင် NLD ပါတီဝင်ဦးရေမှာ ၁.၂ သန်းကျော်ရှိ ပြီဒေါ်စုကြည်နှင့် NLD ပါတီ၏ ရှေ့အလားအလာ ကောင်းမွန်လာသည်မှာ မငြင်းနိုင်သည့် အချက် တစ်ချက်ပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒေါ်စုကြည် သမ္မတရာထူးရရှိရန်မှာ မလွယ်ကူ လှပေ။
ဒေါ်စုကြည်၏ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သည့် ယောက်ျားမှာ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦး ဖြစ်နေခြင်း၊ စစ်ရေး စစ်ရာကိ စ္စများ တွင် ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း စသည် တို့ကြောင့် လက်ရှိအခြေခံဥပဒေအရ ဒေါ်စုကြည်မှာ သမ္မတ ရာထူး အတွက် အရည် အချင်း မပြည့် မီပေ။ ဒေါ်စုကြည် သမ္မတ ဖြစ်ရန်အတွက် အခြေခံ ဥပဒေပါ အချက် များကို ပြင်ဆင် ရန် လိုအပ်ပါသည်။
သို့သော် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရန်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ၏ လေးပုံသုံးပုံက ထောက်ခံ ရမည် ဖြစ် သည်။ လက်ရှိလွှတ်တော်တွင် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ၏ လေးပုံတစ်ပုံမှာ တပ်မတော်သား ကိုယ်စား လှယ် များဖြစ်ကာ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရာတွင် ၎င်းတို့၏ မဲအရေအတွက်ကသာ နောက်ဆုံး အဆုံး အဖြတ်ပေး မည်ဖြစ်သည်။
တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များသည် လက်ရှိအာဏာရ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ကိုထောက် ခံကြ ပါသည်။ အခြေခံဥပဒေပါ ထိုအချက်များကိုပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါက ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်မှု အာဏာ အား စွန့်လွှတ် ရာရောက် မည်ဖြစ် ပါသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် သူမ NLD ပါတီတည်ထောင်ချိန်၌ လုပ်ဆောင်ခဲ့သကဲ့သို့ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့အစည်း အားလုံးကို စုစည်းရေးနှင့် ဦးဆောင်ရေးတို့ကို ယခုအခါဒေါ်စုကြည် မဆောင်ရွက်နိုင်တော့ပေ။ ၈၈ မျိုး ဆက် ကျောင်းသား အဖွဲ့နှင့် NDF ပါတီကဲ့သို့ အတိုက်အခံပါတီ များစွာသည် NLD ၏ နိုင်ငံရေးသြဇာ လွှမ်းမိုးမှု ကင်းသည့် ပါတီအဖြစ် ကြိုးပမ်းလာကြပြီး NLD ပါတီနှင့် အတိုက်အခံဖြစ်သည်များပင် ရှိပါသည်။
ထို့ပြင် ရခိုင်နှင့် ကချင်အရေးများကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားပြဿနာများအပေါ် ဒေါ်စုကြည်၏ လျစ်လျူ ရှုမှုများ က တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများ၏ မကျေနပ်မှုကို နှိုးဆွခဲ့သည်။
NLD ပါတီအတွင်း အသက်ကြီးပိုင်း ပါတီဝင်များနှင့် သက်လတ်ပိုင်း ပါတီဝင်များအကြား အာဏာ အားပြိုင် မှုများ လည်း အပြင်းအထန် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ပထမအကြိမ်ပါတီညီလာခံတွင် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ ကိုပါ ဝင်ရန် ပြောကြား ခဲ့သော်လည်း ယခင် မျိုး ဆက်ဟောင်းများက ပါတီအပေါ် သြဇာ လွှမ်းမိုးမှု ရှိနေဆဲဖြစ် ပါသည်။
NLD ပါတီ၏ သြဇာကြီးမားမှုသည် အဓိကအားဖြင့် ဒေါ်စုကြည်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ အတိုက်အခံ ပါတီ တစ်ခု ဖြစ်သည့် အတွက် NLD ပါတီသည် အုပ်ချုပ်မှုပိုင်း အတွေ့အကြုံမရှိဘဲ နည်းစနစ်ကျသည့် အုပ်ချုပ်မှု အစီအစဉ် များကိုလည်း မချမှတ်ရသေးပေ။ NLD ပါတီတွင် အတွေ့အကြုံရှိသော ထူးချွန် ထက်မြက် သူများလည်း မရှိပါ။
ထို့အတွက်ကြောင့် NLD ပါတီသည် ပြင်းထန်သည့် တိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခများ၊ များစွာသော ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှု များနှင့် ခေတ်နောက်ကျန်နေသည့် စီးပွားရေးစသည်တို့ကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံကို ဦးဆောင် ရန် အရည်အချင်းရှိ/မရှိ အပြင်ကမ္ဘာက သံသယရှိပါသည်။
ယခု အာဏာရပါတီသည် NLD ပါတီကဲ့သို့ လူကြိုက်မများသော်လည်း တပ်မတော်၏ ထောက်ခံမှု ရပြီး အုပ်ချုပ်မှု ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများစွာရှိပါသည်။ ဒေါ်စုကြည် အသက် ၇၀ ပြည့်မည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက် ပွဲရောက် ရှိရန် နှစ်နှစ်လိုပါသေးသည်။ ထိုကာလအတွင်း ဒေါ်စုကြည်နှင့် သူ၏ NLD ပါတီ သည် အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားပြီး ဒေါ်စုကြည် သမ္မတဖြစ်လာ/ မလာကို စောင့်ကြည့် ရဦး မည် ဖြစ်ပါ သည်။
Global Times, 17-3-2013
Suu Kyi’s path to presidency proves tough ဆောင်းပါးအား ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုပါသည်။
လူမျိုးရေး ခွဲခြားတဲ့ Air France ဒဏ်တပ်ခံရ
ပြင်သစ် လေကြောင်းလိုင်း Air France ကို လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုနဲ့ ပြင်သစ် တရားရုံး တခုက ဒေါ်လာ တသောင်း ခြောက်ထောင် ဒဏ်တပ် လိုက် ပါတယ်။
အစ္စရေးကို ပျံသန်းတဲ့ ခရီးစဉ် တခုမှာ ပါလက် စတိုင်း အရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ Horia Ankour ကို အစ္စရေး နိုင်ငံသား ၊ ဂျူး လူမျိုး မဟုတ်တဲ့ အတွက် Air France က လေယာဉ် ပေး မစီး ခဲ့တာ ဖြစ် ပါတယ်။
သူနာပြု သင်တန်း တက်နေတဲ့ ကျောင်းသူ ဟိုရီယာ အန်ခါ ဟာ မနှစ်တုန်းက ပါလက်စတိုင်း အရေး စည်းရုံး လှုပ်ရှားမှုမှာ တခြားသူတွေနဲ့ အတူ ပါဝင်နိုင်ဖို့ ပြင်သစ် ကနေ တဲလာဗိ ကို သွားဖို့ ပြင်ဆင် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။
လေကြောင်း လိုင်းက ဝန်ထမ်း တယောက်ကို သူမကို အစ္စရေး ဒါမှမဟုတ် ဂျူးလူမျိုး လားလို့ မေးတဲ့ အခါမှာ သူမက မဟုတ်ဘူးလို့ ပြန် ဖြေခဲ့ တာ ကြောင့် သူမ လိုက်ပါမယ့် ခရီးစဉ် ကနေ ဖယ်ရှား ခံခဲ့ရ တာ ဖြစ်ပါ တယ်။
အစ္စရေးက ပေးလာတဲ့ လက်မခံရ ဆိုတဲ့ စာရင်း ထဲမှာ သူမ နာမယ် ပါလို့ အခုလို လုပ်ရတာလို့ အဲဖရန့်စ် က ပြောပြီး ဒီ အမှုကို အယူခံ ဝင်မယ်လို့ လည်း ဆိုပါတယ်။
Posted by drmyochit Friday, April 05, 2013, under ပညာရေးဆောင်းပါး | No comments
ကျနော် တို့ နေထိုင်ရာ လူအဖွဲ့ အစည်းတွင် အကြားနှင့် သောတ အာရုံ သန်စွမ်း သူများမှာ အများစု ဖြစ်ကာ စကားပြောဘာသာစကားကို အဓိကထား သုံးစွဲနေ ကြပြီး၊ အကြားနှင့် သောတအာရုံ မသန်စွမ်းသူများမှာ လူနည်းစု ဖြစ်ကာ လက်ဟန် ဘာသာစကား (Sign Language) ကို အများစုမှ သိရှိသူ နည်းပါး လှသည်။ Body Language အဖြစ် ထင်မှတ်ထားကြသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်မှာ ဒုနှင့်ဒေးပင် ဖြစ် သည်။ ထို့သို့သော် အကြောင်းရင်းကြောင့် လက်ဟန်ဘာသာစကား အကြောင်းကို ရှင်းလင်း တင်ပြလိုပါသည်။
ကမ္ဘာ့ပေါ်တွင် စကားပြော ဘာသာ စကား အမျိုးပေါင်း ထောင်ကျော် ရှိသော်လည်း လက်ဟန် ဘာသာ စကားသည် ၁၂၀ ကျော်ခန့် ရှိသည်။ အသုံး အများဆုံးမှာ အမေရိကန် လက်ဟန် ဘာသာ စကားနှင့် ဗြိတိသျှ လက်ဟန် ဘာသာ စကားပင် ဖြစ်သည်။ အမေ ရိကန် လက်ဟန် ဘာသာ စကားသည် အမေရိကန် အက္ခရာ ကို လက် တဖက်ဖြင့် အသုံး ပြုသည်။ ဗြိတိသျှ လက်ဟန် ဘာသာ စကားသည် ဗြိတိသျှ အက္ခရာ ကို လက်နှစ် ဘက်ဖြင့် အသုံးပြု သည်။ အင်္ဂလိပ်နှင့် အမေရိကန် တို့သည် စကားပြော ဘာသာ စကားတွင် များစွာ တူညီ သော်လည်း လက်ဟန် ဘာသာ စကားတွင် လုံးဝ တူညီမှု မရှိ ကွဲပြားခြား နားလေသည်။ လက်ဟန် ဘာသာ စကား၏ တန်ဖိုးနှင့် ဂုဏ်သိ က္ခာပင် ဖြစ်သည်။
ဗြိတိသျှ လက်ဟန်ဘာသာစကားကို ဗြိတိသျှ ဓနသဟာယနိုင်ငံများတွင် များစွာ အသုံးပြုသုံးစွဲပြီး အမေရိ ကန် လက်ဟန် ဘာသာ စကားကို ကိုယ်ပိုင် လက် ဟန် ဘာသာ စကားမရှိသောနိုင်ငံများတွင် အထူး အသုံးပြု ပြောဆို ဆက်သွယ်ကြသည်။ လက်ဟန်ဘာသာစကားသည် အကြားနှင့် သောတအာရုံ မသန်စွမ်း သူများ အဓိက သုံးစွဲနေကြသောလည်း တနိုင်ငံနှင့် တနိုင်ငံ မတူညီကြချေ။ ဥပမာအားဖြင့် မြန်မာနှင့် ထိုင်းသည် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံဖြစ် သော်လည်း စကားပြောဘာသာစကားတွင် မတူညီ ကွဲပြားသလိ်ု လက်ဟန်ဘာ သာစကား သည်ပင်လျှင် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ ကွန်ဖရင့်များ၊ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေး ပွဲ များတွင် ဗြိတိသျှ လက်ဟန်နှင့် အမေရိကန် လက်ဟန်ကို အသုံးမပြုချေ။ အင်တာနေရှင်နယ် လက်ဟန် ကို သာ အထူးပြု သုံးစွဲ ဆက်သွယ် ဆွေးနွေးကြပါသည်။
လက်ဟန်ဘာသာစကားသည် အသံထွက် ဘာသာစကားမဟုတ်၊ အသံမဲ့ ဘာသာစကားပင် ဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံ အရ သဒါ၊ ၀ါကျ၊ စကားလုံး ဝေါဟောရ ကြွယ်ဝစွာ ရှိသည်ကို မြန်မာပြည်နှင့် Undevelopment Country နိုင်ငံများတွင် သိရှိသူနည်းပါးလှသည်။ အစိုးရပိုင်းမှာ စိတ်ဝင်စား အားပေးမှု နည်းပါ ခြင်း၊ လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ရှေးဆန်သောအမြင်၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံအရ ဆုံးဖြတ်သော ဘာသာရေးအမြင်၊ မသန်စွမ်းသူများအပေါ် ထားရှိသောအမြင်တို့ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
တိုးတက် ဖွံ့ဖြိ်ုးသော နိုင်ငံ များတွင် မသန်စွမ်း သူများ အတွက် ရရှိ သင့်သော အခွင့် အရေး များကို ပြဌာန်း ပေးခြင်း၊ မသန်စွမ်းသူများအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှား ရန် အားလုံး ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်သောကြောင့် တိုးတက် အောင်မြင်လျက် ရှိလေသည်။ စကား မပြော တတ် နားမကြား သူများ၏ မိခင်ဘာသာစကား ဖြစ်သော Sign Language ဘာသာ စကားကို သုတေသနပြုခြင်း၊ ခွဲခြားစိတ်ဖြာ လေ့လာခြင်း၊ ဘာသာဗေဒ မှတ်တမ်းပြုစုခြင်းကို အစိုးရမှာ အားပေး ထောက်ခံပြီး နောက်ကွယ်မှာ ကူညီပံ့ပိုးပေးသည်အပြင် အများပြည်သူ့ နားလည် သဘော ပေါက်အောင် ပညာပေးသင်တန်းပေးခြင်းနဲ့ Inclusive Theory အရ လက်ဟန်ဘာသာပြန်များ မွေးထုတ် ပေးလျက် ရှိသည်။
ဘာသာပြန်ဟူသည်မှာ ကြားခံ ဘာသာစကား ဆက်သွယ်ပေးသောသူ ဟု အဓိပ္ပာယ်ရလေသည်။ ရှေး ခေတ်က တနိုင်ငံနှင့် တနိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေး၊ ကုန်သွယ်မှု၊ တဘက်နှင့် တဘက် အငြင်းပွားမှု ကိစရပ် များတွင် ဘာသာပြန်များသည် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘာသာ ပြန်များသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သောအရာများ ဖြစ်သလို အကြားအာရုံ သန်စွမ်းသူများနှင့် အကြားနှင့် သောတ အာရုံ မသန်စွမ်းသူများ ဆက်သွယ် ပြောဆိုနိုင်ရန် Sign Language Interpreter များလည်း လိုအပ် ပေသည်။
Sign Language ဘာသာပြန်များ ပေါ်ထွက်လာရန် လုပ်ဆောင် ရမည် အဆင့်ဆင့် များ ရှိနေပါသည်။ ပထမဆုံး အနေဖြင့် အကြားနှင့် သောတအာရုံ မသန်စွမ်း သူများ၏ ဘ၀နှင့် သူတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု (Deaf Culture)ကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ လိုအပ်ပေ သည်။ Hearing Culture are different to Deaf Culture ဆိုသည် စကားအတိုင်း ခြားနားချက်ကို ဘာသာ ပြန်များ၏ အသိတွင် ထည့်သွင်းပေးရမည်။ ထို့မှသာ ဘာသာပြန်အတတ်ကို သင်ယူတတ် မြောက်နိုင် ပေသည်။ လက်ဟန်ဘာသာစကား အခြေ ခံ မှ စကာ ကျွမ်းကျင်သူအဆင့်ထိ အဆုံး သင်ယူလျင် အနည်းဆုံး ၂ နှစ်မှ အများဆုံး ၄ နှစ်ထိ သင်ယူကြ ရသည်။ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသော နိုင်ငံများတွင် လက်ဟန်ဘာသာပြန်အမြောက်အမြား မွေးထုတ်ပေး လျက်ရှိသည်။
လက်ဟန်ဘာသာပြန်မွေးထုတ်ခြင်းသည် လူအဖွဲ့အစည်းပေါ်တွင် များစွာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသည် အပြင် စကားမပြောတတ်၊ နားမကြားသူများ၏ အသံနှင့် ရင်တွင်းကလာသော စကားများ၊ အခက် အခဲများနှင့် လိုအပ်ချက်များကို အကြားအာရုံ သန်စွမ်းသူ လူများစုထံသို့ ရင်ဖွင့်နိုင်သလို သတင်းစကား ပြောကြား နိုင် သောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။ နောက်ပြီး ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ အလုပ်ခွင်အတွင်း၊ ပညာသင် ယူမူနှင့် တရားရုံးအမှုအခင်း ကိစရပ်များတွင် နားမကြားသူများအတွက် လက်ဟန်ဘာသာ ပြန်သည် လိုအပ်ပေ သည်။ နိုင်ငံတကာတွင်လည်း ထိပ်သီး အစည်းအဝေးများ၊ အဆင့်မြင့် တကသိုလ် ပညာသင် ယူမှုတွင် လက်ဟန်ဘာသာပြန်များကို ထားရှိလေသည်။ ရုပ်သံ သတင်းများတွင် နားမကြားသူများနှင့် ပူးတွဲကာ သတင်းများကို နားမကြားသူများထံ သတင်းပေးပို့သည်။
ယနေ့ ထိုင်းနိုင်ငံသည် မြန်မာတို့ထက် များစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကာ ရှေ့သို့ ရောက်ခဲ့သည်အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံ တ၀ှမ်းတွင် နားမကြားကျောင်း ၂၀ ကျော် ရှိပြီး၊ နယ်စပ်ဒေသတလျှောက်မှာ မြန်မာ နားမကြား ကလေး ငယ်များသည် ထိုင်း နားမကြားကျောင်းတွင် ပညာသင်ယူနေသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ နားမကြား အသင်းအဖွဲ့ များစွာလည်း ရှိပြီး ဘန်ကောက်မြို့ မဟီဒိုးလ်တကသိုလ်လက်အောက်ရှိ ရာချစူဒါ ကောလိပ် တွင် လက်ဟန်ဘာသာစကား သုတေသန ပြုသည်အပြင် ဘာသာပြန်များကို သင်တန်းပေး လေ့ကျင့်ကာ မွေးထုတ် လျက်ရှိ သည်မှာ ထိုင်းအစိုးရ၊ နားမကြားကျောင်း၊ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် နားမကြားမိသားစုများ၏ ကြိုးစားမှုရ လဒ်ပင်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ထိုင်းနိုင်ငံထက် နယ်မြေအနေအထား ကျယ်ဝန်းသော်လည်း နားမကြားကျောင်း ၂ ကျောင်း သာ ရှိပြီး ရန်ကုန်နှင့် မန်းလေးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ရန်ကုန်ကျောင်းမှာ မေရီချပ်မင်ဆိုသည် အင်္ဂလိပ် အမျိုး သမီးက ၁၉၂၀ ခန့်တွင် ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီး ၁၉၆၂ နောက်ပိုင်းတွင် ခရစ်ယာန်သာသနာပြု ဘာသာရေး အဖွဲ့က လွှဲပြောင်းလက်ခံ သင်ကြားပို့ချသည်။ မန်းလေးကျောင်းမှာ လူမှုဝန် ထမ်းဦး စီးဌာနလက်အောက်တွင် ရှိပြီး ၁၉၈၀ ကျော်ခန့်က ဖွင့်လှစ် သင်ကြားသည်။ နားမကြားသူ သိန်းဂ ဏန်းကျော် ရှိသော်လည်း ကျောင်း ၂ ကျောင်း ဖြင့် ဘယ်လိုမှ ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ပညာသင်ယူခွင့် ဆုံးရှုံး နေသာ နားမကြား ကလေးငယ်များ ရှိသည်ကို အားလုံးသိရှိ နားလည်ပေးစေလိုပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် အသင်းအဖွဲ့များကို တရားဝင် ဖွဲ့စည်းခွင့် မရှိခဲ့ပါ။ ယာယီမှတ်ပုံတင်ဖြင့်သာ စခန်းသွား နေရသည် အပြင် လက်ဟန်ဘာသာပြန် သင်တန်းကျောင်း မရှိပါ။ အခုမှ စတင် ကြိုးစားနေကြောင့် သိရှိရပါသည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှာ ဟိန္ဒူဘာသာရေး ကျောင်းများ ဆက်လက် တိုက်ခိုက်ခံနေရ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံမှာ ဟိန္ဒူဘုရား ရှိခိုး ကျောင်းတွေ ဆက်လက် တိုက်ခိုက် ဖျက် ဆီး ခံနေကြ ရပါတယ်။
ယမန်နေ့ နံနက်ကလည်း Bagarhat ခရိုင် Morelganj မြို့နယ်က ဟိန္ဒူ ဘုရား ကျောင်း တစ်ခု ရုပ်ထု တွေကို ၀င်ရောက် ဖျက်ဆီးပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဟိန္ဒူ နတ်ဘုရား ရုပ်တွေကို မီးရှို့ ခဲ့ကြ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီကနေ့ထုတ် The Daily Star မှာ လူအုပ်စု တစ်ခုဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ညနေ သန်ခေါင်မှာ Morelganj မြို့နယ် Teligati ကျေးရွာ အုပ်စုက Herma ဈေးမှာ တည်ရှိတဲ့ Sarbojanin Durga ဘုရား ရှိခိုး ကျောင်းကို ချိုးဖေါက် ၀င်ရောက်ပြီး ဟိန္ဒူ နတ်ဘုရား ရုပ်ထုတွေ ဖြစ်တဲ့ Ganesh နဲ့ နတ်ဘုရားမ ရုပ်ထုတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Laksmi နဲ့ Saraswati ရုပ်ထုတွေကို ဖျက်ဆီသွားခဲ့ကြတယ်လို့ ရဲအဖွဲ့ကို ကိုးကားပြီး ဖေါ်ပြပါတယ်။
ခုလို ၀င်ရောက်ဖျက် ဆီးသွား တာကို ဟိန္ဒူ ဘာသာ ၀င်တွေ အနေနဲ့ နံနက် စောစော ဘုရားကျောင်းကို သွားတဲ့ အချိန်မှာမှ မြင်တွေ့ ခဲ့ရ တယ်လို့ ဘုရားကျောင်း ဥက္ကဌက သတင်း ထောက်တွေ ကို ပြောဆို ပါတယ်။
ဖျက်ဆီး ခံရတဲ့ ဘုရား ကျောင်းကို အဲဒီ ဒေသက လွှတ်တော် အမတ် တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ Mozammel Hossain သွားရောက် ကြည့်ရှု့ ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီ Morelganj မြို့နယ်က ဟိန္ဒူ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေကို ၀င်ရောက် ဖျက်ဆီးနေ တာဟာ ဖေဖေါ် ၀ါရီလ ကတည်းက စတင် ပေါ်ပေါက် နေတာ ဖြစ်ပြီး ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့မှာတော့ Gopalpur Sarbojanin ဘုရား ရှိခိုး ကျောင်း ဖျက်ဆီး ခံရပြီး မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှာတော့ Dumuria Sarbojanin ဘုရား ရှိခိုးကျောင်း ဖျက်ဆီး ခံခဲ့ရ ပါတယ်။ မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာတော့ North Gopalpur ဘုရား ရှိခိုးကျောင်း ဖျက်ဆီး ခံခဲ့ရ ပါတယ်။
ခုလို ဘုရားကျောင်း တွေကို တိုက်ခိုက် နေတာဟာ အဲဒီ ဒေသ တစ်ခု တည်းမှာ မဟုတ်ဘဲ တစ်ခြား ဒေသ တွေမှာလည်း ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ပေါ်ပေါက် နေပါတယ်။
မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ကလည်း ဘိုဂါရာ ( Bogra) ခရိုင် Sonatala မြို့နယ်မှာ ဟိန္ဒူ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တစ်ခု ကို ၀င်ရောက် တိုက် ခိုက်ပြီး အနည်း ဆုံး နတ်ဘုရား ရုပ်ထု (၇) ကို ဖျက်ဆီး ပစ်ခဲ့ကြ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေ မယ့် ရဲအဖွဲ့က တစ်စုံ တစ်ဦး ကိုမှ ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်း မရှိ ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၃ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့က စပြီး ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံမှာ လူနည်းစု ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ဘုရား ရှိခိုးကျောင်း အနည်း ဆုံး ၂၈ ကျောင်း၊ အနည်းဆုံး အိမ်ပေါင်း ၁၇၅ လုံးနဲ့ ဒါဇင်နဲ့ ချီတဲ့ ဈေး ဆိုင်တွေ မီးရှို့ ဖျက်ဆီး ခံခဲ့ကြ ရပြီလို့ သိရ ပါ တယ်။
လူကြားထဲမှာ အဆင်မပြေသော်လည်း ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းသော အစားအသောက် ၅ မျိုး
လူကြားထဲမှာ စားရင် ခံတွင်း အနံ့ နံစေတာကြောင့် အဆင် မပြေပေမယ့် အရ သာရှိပြီး ကျန်းမာရေး အတွက် ကောင်း မွန်တဲ့ အစားအစာ တွေကို ရေးသား လိုက် ရပါတယ်။
၁) ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ကြက်သွန်နီ
ကြက် သွန်ဖြူနဲ့ ကြက်သွန်နီကို အစိမ်းလိုက် စား တာကြောင့် ခံတွင်းအနံ့ နံတာက ချက် ချင်းဖြစ် တတ်ပြီး နာရီပေါင်း များစွာ ကြာတဲ့အထိ အနံ့ မပျောက်နိုင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကြက်သွန် နီနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူမှာ ဆာလဖာဒြပ်ပေါင်းတွေ ပါဝင်တာကြောင့် အလွန် အနံ့နံပြီး ခံတွင်းနံ့ ဆိုးစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအနံ့က သွားမှာ စားကြွင်းစားကျန် ကပ်ငြိပြီး ထွက်လာတဲ့ အနံ့မျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအစာတွေ ကို ချေဖျက်လိုက်တဲ့အခါ စူးရှတဲ့ အဆီတွေက သွေးကြောထဲကို စုပ်ယူသွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အဆုတ် ဆီကို သယ်သွားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သင်ပါးစပ်ဟတိုင်း အနံ့နံနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ချက်တဲ့ ဟင်းလျာထဲမှာ ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်၊ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ကြက်သွန်နီတို့ကို ထည့်တာက ဆားလို အပ်မှု နည်းစေတာကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ကြက်သွန်နီထဲမှာပါတဲ့ ဖိုင်တို ကမ်မီကယ်တွေကလည်း ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးပြီး ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ကြက်သွန်နီကို စားပြီးတဲ့အခါ ရေကို များများ သောက်ပေးပါ။ နွားနို့ကို သောက်တာ ကလည်း ခံတွင်းအနံ့ နံစေတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ပူဒီနာ၊ ပီကေ၊ ပူရှိန်း၊ သကြားလုံး စားတာနဲ့ ပက်ပါးမင့် လက်ဖက်ရည်သောက်တာတွေကို လုပ်ပေးပါ။ ခံတွင်း အနံ့ဆိုး ထွက်တာ က အစာခြေစနစ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ မကောင်းတဲ့ လက္ခဏာ ဒါမှမဟုတ် သွားနဲ့ ခံတွင်းထိန်းသိမ်းမှု မကောင်း တာ တွေရဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် အချိန်ကြာတဲ့အထိ ခံတွင်းနံ့နံနေရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
မုန်လာဥနီကို အများကြီး စားလိုက်ရင် အရေပြားကို လိမ္မော်ရောင် သန်းစေပါတယ်။
ဒါကို ဆေးပညာ ဝေါဟာရအရ Carotenaemia လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မုန်လာဥနီမှာပါတဲ့ ဘီတာကယ် ရို တင်းတွေ အများကြီးက အရေပြားကို လိမ္မော်ရောင် သန်းစေတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အန္တရာယ်မရှိတဲ့ အခြေ အနေပါ။ သက်သတ်လွတ် စားသူတွေနဲ့ သရေစာအဖြစ် မုန်လာဥနီ အစားများတဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာ တွေ့ ရတာ များ ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ အသားဝါ ရောဂါနဲ့ လွဲမှားတတ်ပါတယ်။
ဗီတာမင်အေပါဝင်မှု များတာကြောင့် မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းပါတယ်။
အရေပြားဟာ စားတဲ့အစားအသောက်၊ နေထိုင်မှုပုံစံတွေနဲ့ သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ရေကို များ များသောက်ပါ၊ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ပါ၊ အစားအသောက်ကို အစုံစားပါ။ အရေပြားအတွက် ကောင်းတဲ့ အရာတွေက အိုမီဂါသရီး ဖက်တီး အက်စစ်၊ ဇင့်(သွပ်)၊ ဗီတာမင် ဘီအုပ်စုနဲ့ ဗီတာမင်စီတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကညွတ်က ဆီးအနံ့ နံစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့လူတွေမှာပဲ ဖြစ်တတ်တာပါ။ စားတဲ့သူ တစ်ဝက် လောက် မှာ ဆီးအနံ့ နံတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကညွတ်ထဲမှာပါတဲ့ ဆာလဖာဒြပ်ပေါင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကနေ စွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ ဆီးဟာ အနံ့နံရတာပါ။
ကညွတ်မှာ အမျှင်ဓာတ် ကောင်းစွာ ပါဝင်ပြီး ဖောလိတ်ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
တစ်ထိုင် တည်းနဲ့ ကညွတ်တွေ အများကြီးကို မစားပါနဲ့။ ကညွတ်စားပြီးချိန်မှာ ရေများများ သောက်ပေးပါ။ ဒါမှ အနံ့ဆိုးထွက်စေတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေက ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ထွက်သွားမှာပါ။ ဆီးအနံ့ နံတာက ဆီး လမ်းကြောင်း ပိုးဝင်တဲ့လက္ခဏာ ဖြစ်တတ်တာကြောင့် ကညွတ် မစားတော့တဲ့ ရက်တွေအထိ ဆီးအနံ့ နံနေရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်ပါတယ်။
၄) ကင်ထားသော ပဲများ
ပဲတွေကို များများ စားလေလေ၊ လေလည်နိုင်ခြေ များလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။
ပဲတွေထဲမှာ ပျော်ဝင် အမျှင်ဓာတ်မြင့်မားစွာ ပါဝင်တာကြောင့် အူမကြီးထဲ ရောက်တဲ့အထိ ကောင်းကောင်း မချေဖျက်နိုင် ပါဘူး။ နောက်ဆုံး ချေဖျက်ပြီးတဲ့ အခါမှာ လေ (Gas) ထွက်လာပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ် များစွာပါတဲ့ အစာတွေက ရောဂါမျိုးစုံကို မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပြီး အစာခြေ စနစ်ကို ကျန်းမာ စေပါတယ်။ ဆီးချိုသွေးချို ရောဂါရှင်၊ သွေးတွင်း ကိုလက် စထရော များသူနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချ လို သူတွေ အတွက် အကျိုးကျေးဇူး များပါတယ်။
ဘယ်လို လုပ်သင့်သလဲချင်း (ဂျင်း)၊ နွယ်ချို၊ ပက်ပါးမင့်နဲ့ သံပရာသီး စတာတွေက လေပွ၊ လေထတာကို သက်သာစေ ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲကို ဒီလို ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ တွဲစားပေးသင့်ပါတယ်။
ဝိုင်နီကို များများသောက်ရင် သင့်သွားတွေမှာ နီရဲနေပြီး ဒရက်ကူလာနဲ့ တူနေပါလိမ့်မယ်။
ဝိုင်နီမှာ ပိုလီဖီနောဓာတ်ပါဝင်တာကြောင့် သွားတွေကို အစွန်းထင်စေပါတယ်။
ဝိုင်နီကို အသင့်အတင့် သောက်ရင်တော့ သွားဖုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ဝိုင်နီမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် ပါဝင်မှုများတာကြောင့် နှလုံးသွေးကြော ဆိုင်ရာရောဂါတွေလို ရောဂါတွေကို မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့မှာ နှစ်ခွက်ထက် မပိုပါစေနဲ့။
ဝိုင်နီ သောက်ပြီးတိုင်း သွားအစွန်းထင်တာ ကင်းအောင် ပလုတ်ကျင်းပေးပါ။ သွားကို ပုံမှန်တိုက်ပေးပါ။